Online Burma Library > Reading Room > News - Private sector publications produced under censorship restrictions > Weekly magazines > "[The] Myanmar Times" (English) > "The Myanmar Times" (Burmese) 2012/ မြန်မာတိုင်းမ်- ၂၀၁၂
Home > Reading Room > News - Private sector publications produced under censorship restrictions > Weekly magazines > "[The] Myanmar Times" (English) > "The Myanmar Times" (Burmese) 2012/ မြန်မာတိုင်းမ်- ၂၀၁၂
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)4October 2012- Vol. 30, No.589" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၉ ၊ ၄-၁၀-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပို့ကုန်များတင်ပို့နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိနေသေး... ပင်စင်ငွေအခက်အခဲများအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားနိုင်... ဖယ်ခုံမြေ တက်လမ်းကုမ္ပဏီရရှိမှုအပေါ် ဒေသခံများမှ ကန့်ကွက်၍ စီမံကိန်းခေတ္တရပ်ဆိုင်း... လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းအား ပြန်လည် စဉ်းစားသုံးသပ်ပေးရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ထံသို့ တောင်းဆို... ကြေးနီစီမံကိန်းဆိုင်ရာ လယ်ယာမြေ အငြင်း ပွားမှု နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရှင်းလင်း... ကြေးနီစီမံကိန်းကိစ္စတွင် မြွေလည်းမသေစေလိုပါ၊ တုတ်လည်း မကျိုးစေလိုပါ... ကချင်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရရန် အစိုးရဘက်က စိတ်ရှည်သည်းခံစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား... သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အပြန်ခရီး တွင် ပြည်သူများက ကြိုဆို... သမ္မတ၏ ကုလမိန့်ခွန်းကို အများက လက်ခံချီးကျူး... ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တုသစ် ထားရှိရန် အဆိုကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြမည်... ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူနှစ်ဦးအား တရားရုံးနှစ်ရုံးမှ စတင်စွဲ ချက်တင်... e-government လုပ်ငန်းအတွက် ကိုးရီးယားနှင့် master plan ရေးဆွဲ... ငှက်ဖျားရောဂါထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထံ ပိုမိုရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည်... ဒိုဟာ-ရန်ကုန်၊လေကြောင်း စတင် မဲစာရင်းစာအုပ်များကို အမြဲပုံသေထားရန်စီစဉ်... ဥပဒေစိုးမိုးနိုင်ရန် ဥပဒေ၏အရည်အသွေးကို ဦးစွာမြှင့်ရန်လို၊ တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆန်းစစ်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများတိုက်တွန်း... ဘရာဇီးလ်အစိုး ရနှင့် ပြည်သူများက ရခိုင်ဒုက္ခသည် များအတွက် 'ကန်'ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ လှူဒါန်း... ပြည်ပလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအား စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဟုဆို... နတ်မတောင် ဘေးမဲ့တောကို အာဆီယံအမွေ အနှစ် သတ်မှတ်... သက်ကြီးရွယ်အိုများစောင့်ရှောက်ရေးကို ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်... အရက်ကြောင့် စိတ်ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အရေအတွက် ပိုမိုများပြားလာ... ဧရာဝတီလင်းပိုင် သုတေသနနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ငါးနှစ်သက်တမ်း ... ထပ်မံတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်သွားရန် သဘောတူ... ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်းရေး အစီရင်ခံစာ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင် တင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေ... မိခင်နှင့် ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေးအတွက် 'ကန်'ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ထောက်ပံ့ပေးမည်... မဟတ္တမဂန္ဒီ၏ ၁၄၃ နှစ်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်၌ကျင်းပ... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ကျပ် ၈၅ ဘီလျံခန့် လိုငွေပြ... အောက်တိုဘာလကုန်တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ညီလာခံကျင်းပရန်စီစဉ်... Huawei ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး အဆင့် မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သုံးသန်း လှူဒါန်း... ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ကဏ္ဍစုံတွင် မကြာမီဝင် ရောက်လာမည်... ဒုတိယစီးပွားရေး မြို့တော်စီမံကိန်းတွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း မပြုရဘဲ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရန် မင်းဓမ္မပန်းကွင်းမှ ဆိုင်ရှင်များ တောင်းဆို... မြန်မာ့ သီးနှံပြပွဲ ပြုလုပ် သွားမည်... ပြင်ပကားဈေးကွက် အရောင်းအ၀ယ် အနည်းငယ်ပြန် လိုက်လာ... မြန်မာ့ကျွဲကော ပြည်ပဈေးကွက်ရသော်လည်း တိုးချဲ့စိုက်ရန်လို... ၂၀၁၂ အတွင်း ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် တင်ဒါခေါ်ယူမှု စတင်နိုင်မည်... ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် သီးသန့်ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ပေါ်တော့မည်... အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုအသင်း ပထမအကြိမ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့... ထိုင်းနိုင်ငံပတ္တယာမြို့တွင် အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လျက်ရှိ... အစိုးရအိမ်ရာပေါ်လစီများကို စင်ကာပူအစိုးရ လျှော့ချပေးခဲ့... ထူးခြားတဲ့အပြင်အဆင်နဲ့ ကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်းရှိတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်က လုံးချင်းအိမ်... အာရ်အိုင်ဘီအေ က ဟောင်ကောင်တွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဗိသုကာ အသင်းဖွဲ့စည်းခဲ့... တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လျှပ်စစ်မီးပြည့်ဝစွာရရှိနိုင်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း... အခွန်စည်းကြပ်မှုကို စနစ်တ ကျဖြစ်စေလိုဟု အမရပူရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြော... အရှုပ်အရှင်းတွေကြားထဲက မန္တလေးအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်... မန္တလေး၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မြို့နယ်တချို့တွင်ရေနစ်မြုပ်... ရွှေ့ပြောင်းရန် နေရာမရှိသည့် ကျောက်ဆစ်လုပ်ငန်းများအတွက် နေရာလှူဒါန်းရန်ကမ်းလှမ်း...မုံရွာကြေးနီမိုင်းအနီး နေထိုင်သူများ လေထုရေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဆိုးရွားစွာကြုံတွေ့နေရဟုဆ... တရုတ်တင်ပို့သည့်ပစ္စည်း ဈေးကျ... ယခုနှစ်မကုန်မီ ယာဉ်မတော်တဆ မှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ယမန်နှစ်ထက် ကျော်လွန်... မြေပဲဆန်ဈေးနှင့် ပဲဆီဈေးများ ကျသော်လည်း ပဲဆီရောင်းအားမှာမူ တက်လာခြင်းမရှိသေး...အက်စ်အမ်အီးဘဏ်မှ ချေးငွေတိုးရန်ဗဟိုဘဏ်သို့ တင်ပြထား ဟုဆ... ဧရာဝတီမြစ်ရေ ၀င်ရောက်၍ မိသားစုရာပေါင်းများစွာ နေအိမ်များစွန့်ကာ ကားလမ်းဘေး ၌ နေထိုင်နေကြရ... အရန်ဆန် တရုတ်တင်ပို့နေဟု စွပ်စွဲချက် ကန့်ကွက်စာတင်မည်... မြန်မာအလှမယ် မစ္စမြန်မာအင်တာနေရှင်နယ် ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်... အကြားအမြင်ဆရာမ အီးတီအကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ တီဗီစီးရီးအဖြစ် ရိုက်ကူးနေ... Rဇာနည် တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲ စင်ကာပူမှာ ပြုလုပ်မည်... ဂျန်းရှင်းမော်တင်ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံတွင် သရီးဒီဇာတ်ကားများ စတင်ပြသ... ကာတွန်းအောင်ရှိန် ပုံတူပန်းချီနဲ့ ပန်းပုများ ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲကြမည်... ကိုယ်ပိုင်နေရာမရှိတဲ့၊ပြဿနာကြုံနေရတဲ့ ရန်ကုန်က စကိတ်သမားများ... ဟောလိဝုဒ်ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးအမျိုးသမီးနေရာ အော်ပရာဝင်းဖရေး ဆက်လက်နေရာယူထား... ဂျော်ဂျီယာတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးပြင်ဆင်... အာဖရိကတပ်ဖွဲ့များ ကစ္စမာယို ဆိပ်ကမ်းမြို့သို့ ၀င်ရောက်... အာရာဖတ် သေဆုံးမှုခဲ့ရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိရှိရန် အလောင်းအား တူးဖော်စစ်ဆေးမည်... စီးပွားရေးကျဆင်း မှုကြောင့်၊ ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ အနာဂတ် မရေမရာဖြစ်လာနိုင်... ဟောင်ကောင်တွင် သင်္ဘောနှစ်စင်းတိုက်မိ၍ လူ ၃၆ ဦးသေဆုံး... ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနှင့် သူပုန်များ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်... မလေးရှား ရေနံစီမံကိန်း လူထောင်ပေါင်းများစွာကန့်ကွက်... မိဘတို့ ၀တ္တရားရှိသည်နှင့်အညီ ... နီပေါတွင် လေယာဉ်ပျက်ကျ၊ လိုက်ပါသူ ၁၉ ဦးစလုံး သေဆုံး... အကျဉ်းချခံရသူများကို တရားရုံးကလျော်ကြေးပေး... မြွေအဆိပ်ဖြင့် ရောဂါကုသနိုင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆန္ဒပြမှုများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်... နိုက်ဂျီးရီးယား ကျောင်းသားများကို သေနတ်သမားတစ်စုက၊ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်... အိန္ဒိယ၊ကျည်ဆန်ရထားများဝယ်မည်... နေပြည်တော်၌် အစိုးရခေါင်းဆောင်များ တည်းခိုနိုင်မည့် အခန်းများလို... မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တာဝန်သိခရီးသွား ပေါ်လစီကို အတည်ပြု... အမ်အေအိုင်က စီတာ၏အဆင့်မြင့် နည်းပညာရပ်များ အသုံးပြုသွားမည်... စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်း အောက်တိုဘာလတွင် စတင်မည်... ဟိုတယ်ဇုန်များ စတင်ဖော်ထုတ်ရန် ပြင်ဆင်နေ... ရန်ကုန်မြို့၌ တည်ဆောက်ဆဲနှင့်တိုးချဲ့နေသည့် ဟိုတယ်များ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးနိုင်မည်... ယခုနှစ်၏ ပထမခုနစ် လအတွင်း နိုင်ငံခြား ဧည့်သည် အ၀င် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်အထိ မြင့်တက်လာ
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 27 September 2012- Vol. 30, No.588" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၈ ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: 1. ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် အမေရိကန်က လက်တွဲကူညီရန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆို... 2. တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဩဇာသုံးလွှမ်းမိုးဟု တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား... 3. ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကို နောက်လတွင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်မည် ... 4. ပျဉ်းမနား၊ ဦးကျေး ကျေးရွာသား မိသားစု ၂၅၀ ကျော် လယ်ကျူးကျော်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရ... 5. လွှတ်တော်အစည်း အဝေးများ ပြန်လည်ကျင်းပမည်... 6. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများနှင့်တွေ့ဆုံ... 7. အေအာရ်တီ ဆေးဝယ်ယူ ရန် သိန်း ၂,၀၀၀၊ကျော် သုံးစွဲသွားမည်... 8. လာမည့် နွေရာသီ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီး အပြည့်အ၀ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ... 9. မြန်မာ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာပြပွဲ ကုမ္ပဏီ ၄၂ ခု ၀င်ရောက်ပြ... 10. မိုးထိမိုးမိ အလုပ်သမားများ ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲရန် စီစဉ်နေ .... 11. ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု၏ တာတေစနေသား စာအုပ်ဖြန့်ချိပွဲ... 12. ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အဖွဲ့ အစည်း နှစ်ခုကြား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ နိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေး ... 13. သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များက သက်ကြီးရွယ်အို ရပိုင်ခွင့်များအား တောင်းဆိုမည်... 14. ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ကရင်အမျိုးသားညီလာခံတစ်ရပ် ကျင်းပပေးရန် ကေအင်န်ယူ ကတိပြု... 15. အော်တစ်ဇင်လက္ခဏာရှိသော ကလေးများအတွက် သက်မွေး ပညာသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီစဉ်နေ... 16. စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်သော မျိုးဆက်သစ်များ ပေါ်ထွက်လာရေး ပညာရေးကိုပြုပြင်ရန်လို... 17. The Voice စာစောင်ကို အသရေဖျက်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်... 18. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ၂၄ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး အထွေထွေညီလာခံ နှစ်ကုန်ပိုင်း လုပ်မည်... 19. မြိတ်မြို့ ရေအရင်းအမြစ်များ၌ ခဲနှင့်အာဆင်းနစ်ပါဝင်မှု ပမာဏအား စစ်ဆေးလျက်ရှိ... 20. တစ်လအတွင်း တိုင်စာ ၆၀ ခန့်ကို အိုင်အယ်လ်အို လက်ခံရရှိနေ... 21. ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာ အနုပညာနှင့် ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ရွှေတိဂုံစေတီ၌ ပြသလျက်ရှိ... 22. ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍလေးခုတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်... 23. သုတေသနပြုလုပ်လိုပါက ဇီဝသိပ္ပံဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ် အရ ခွင့်ပြုချက်လို... 24. ၁၉၆၆ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ အမေရိကန်သို့ ရောက်ရှိ ထောက်ခံ... 25. ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအား တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက စွပ်စွဲပြစ် တင်ရန် စီစဉ်... 26. ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများအား တရားစွဲ သင့်မသင့် မြို့နယ် ဥပဒေတရားရုံးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်နေ... 27. ကြိမ်အချောထည်လုပ်ငန်း ကုန်ကြမ်းရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့လာရ... 28. အီတလီနိုင်ငံရှိ ပန်းခြံတစ်ခုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ထောင့်မှန်ပုံစံ ပန်းခြံအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့... 29. ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၌ ကုန်ကြမ်းသီးသန့်ဝယ်ယူမှုကို သတိပြုသင့်... 30. နန်နင်းကုန်စည်ပြပွဲကြောင့် မြန်မာနှင့် တရုတ်အကြား စီးပွားရေးအရ သာမက နိုင်ငံရေးအရပါ ရလဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်နိုင်... 31. စင်ကာပူနှင့် မြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံ... 32. ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့တွင် ဆု ၂၆ ဆု ချီးမြှင့်သွားမည်... 33. VISA ကုမ္ပဏီ ပြည်တွင်းတွင်လုပ်ကိုင်ရန် ဘဏ်များကိုသေချာစွာ စိစစ်သွားမည်... 34. အောက်တိုဘာလကုန်ခန့်တွင် ၀ယ်လိုအား တက်လာနိုင်သော်လည်း အိမ်ရာဈေးကွက် ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရဦး မည်ဖြစ်... 35. ဆောက်လုပ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့... 36. ဂျပန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၁၂ တပ်မတော်ခန်းမ၌ကျင်းပမည်... 37. ဖွံ့ဖြိုးလာသော မြို့ပြဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းရာတွင် အထောက် အကူပြုရန် ၀န်ထမ်းများကို မြို့ပြမြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်ကြားပေး... 38. အဆိုတော်သားစိုး၏ ပိုးထည်၊ ချည်ထည်ဆိုင်သစ်ဖွင့်လှစ်... 39. သစ်လွင်လှပပြီး သွားလာရေး အချက် အချာကျတဲ့နေရာက ငှားရန်ကွန်ဒို... 40. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ပါဖွန်းမင့် အနုပညာပြကွက်များ ထည့်သွင်းပြသခဲ့... 41. အလေးချိန် နှစ်ပိဿာနီးပါး ရှိသည့် ရွှေအရိုင်းတုံးတွေ့ရှိခဲ့... 42. မြို့တော်ဝန်အား ပြည်သူ့ဆန္ဒသဘောထားနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ စစ်တမ်းကောက်ပြီး သမ္မတထံ တင်ပြသွားမည်... 43. စီမံကိန်းမြေပေါ်နေသူများ မဖြစ်မနေဖယ်ရှားရမည်ဟုဆို... 44. ဈေးချိုပလာဇာ အဆောက်အအုံကို ငှားရမ်း(သို့) အကျိုးတူလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မည်... 45. တစ်ကိုယ်တော်သရုပ်ပြမှု တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြင့် ရပ်တန့်ခဲ့ရ... 46. လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံ... 47. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မီဒီယာကျင့်ဝတ်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့... 48. ရေကြောင်းခရီးလည်ပတ်မှုများလာ၍ သင်္ဘောမလုံလောက်မှု ကြုံလာနိုင်... 49. ဈေးကွက်မလှုပ်ခတ်ဘဲ လူပြောသာများသွားခဲ့ရတဲ့ မန်းအိမ်ခြံမြေ... 50. ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ အလုပ်အကိုင်လိုအပ်ပါက စည်ပင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး နေအိမ်စီစဉ်ပေးမည်... 51. ပညာရဲရင့်ပွဲလယ်တင့်ပြဇာတ် ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့... 52. မန္တလေးမြို့၌ တရားမ၀င်ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများ ပြေးဆွဲနေ... 53. မုံရွာ၊ ရွှေဘို အဆင့်မြင့် အဲကွန်းကား ပြေးဆွဲမည်... 54. အမေရိကန်အခြေစိုက်၊ အဖိနှိပ်ခံ စာရေးဆရာဆုကို စာနယ်ဇင်းဆရာ ဇော်သက်ထွေး ရရှိ... 55. ဆီးဂိမ်းအကြို လှုံ့ဆော်ရေး တေးသီချင်းများ ရွေးချယ်... 56. ဂီတနက်သန် ကိုစောညိန်းကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် (၆၀)ပြည့် အမှတ်တရပွဲ ကျင်းပမည်... 57. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ချစ်ကြည်ရေး အဖွဲ့ရဲ့ ရန်ပုံငွေ ရော့ခ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ... 58. ဂျပန်ကာတွန်း သရုပ်ပြရေးဆွဲခြင်း၊ သင်ကြားပို့ချခြင်းနဲ့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်... 59. နိုင်ငံသစ်များ ပါဝင်လာတဲ့ (၂၁)ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်အောက်တိုဘာ မှာ၊ကျင်းပမယ်... 60. မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းနှင့် ဒီဇိုင်နာ ပြည်စိုးအောင်တို့ ပူးပေါင်းပြီး မင်္ဂလာဝတ်စုံပြပွဲကျင်းပမည်... 61. ၀ိတ်တက်လာ တဲ့ လေဒီဂါဂါ... 62. Big Bang အဖွဲ့ရဲ့ အမေရိကဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ် နှစ်နာရီအတွင်း ရောင်းကုန်... 63. ကုလအထွေထွေညီလာခံ၌ သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြော... 64. ဂျပန်နှင့် တရုတ် (တိုင်ပေ) ရေယာဉ်များ ရင်ဆိုင်တွေ့... 65. ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဒေသမှ 'ရှေနဂါးပွဲတော်' မြင်းစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပ... 66. မြောက်ကိုရီးယား က နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်တင်းရန် ရွှေများထုတ်ရောင်း... 67. လစ်ဗျားပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့များကို ဖျက်သိမ်းသည့်ကိစ္စ မအောင်မြင်... 68. အာဆတ် အာဏာကိုဖက်တွယ်ထား၍ ဆီးရီုးယားအခြေအနေ ပိုဆိုးလာနေ...69. သေမင်းတမန်တောင်မှ ဘေးသင့် တောင်တက်သမားများ... 70. မီဒီယာသူဌေးကြီး မားဒေါ့၏ အသက် ၁၀၃ နှစ်ရှိ မိခင်ကြီး အိမ်တွင်လဲကျပြီး နောက်ဆေးရုံ တင်ထားရ... 71. ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံး ဘီယာပွဲတော်ကြီး မြူးနစ်တွင်ဖွင့်လှစ်... 72. တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို ရေချ... 73. ဆိုက်ရောက် ဗီဇာ လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်မပြည့်စုံ သဖြင့် ကြန့်ကြာမှုများရှိနေ... 74. ဂျာမနီကွန်ဒေါ အဲလိုင်း ရန်ကုန်သို့ ပြေးဆွဲမည်... 75. မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ ကျင်းပ... 76. တောင်ကိုရီးယားနှင့် တိုက်ရိုက်လေကြောင်း စတင်ပြေးဆွဲ... 77. ဟိုတယ်အခန်း ရရှိရန် လေဆိပ်၌ ၀န်ဆောင်ပေး... 78. မလေးရှား၌ အာရှတိုက်၏ ပထမဆုံး Legoland အပန်းဖြေ... 79. ရန်ကုန်မြို့၌ တည်ဆောက်ဆဲနှင့်တိုးချဲ့နေသည့် ဟိုတယ်များ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးနိုင်မည်... 80. ယခုနှစ်၏ ပထမခုနစ် လအတွင်း နိုင်ငံခြား ဧည့်သည် အ၀င် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်အထိ မြင့်တက်လာ 81. ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ စိတ်ဝင်စားသည့် ပုဂံဒေသအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
Date of entry/update: 27 September 2012
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 20 September 2012- Vol. 30, No.587" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၇ ၊ ၂၀-၉-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: အမေရိကန်၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားပိတ်ဆို့မှု လျှော့ပေးရေး ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ... နိုင်ငံတကာက လက်ခံနိုင် သော ဖြေရှင်းချက်မျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ရခိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဆို... "ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါသော အမိန့်နှင့်ဥပဒေများ သည် ဒီမိုကရေစီမဟုတ်၊ အာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်"... နိုင်ငံပိုင်တရားရုံးအဆောက်အအုံများကို ပုဂ္ဂလိက သို့လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို ရှေ့နေများကွန်ရက် အဖွဲ့မှ တရားဝင်ကန့်ကွက်... ထောင်နှင့်ချီသော ကျူးကျော်နေအိမ်များ၊ စတင် ဖယ်ရှား... စာရေးသားခြင်းကို ထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးပြု ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ စာအုပ် တွေ ထုတ်ဝေကြ... တောင်သူ ၁၂၅ ဦး သစ်တောဥပဒေဖြင့် ဒုတိယ အကြိမ် တရားစွဲခံရ... နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၀၀ ခန့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်... သမ္မတခရီးစဉ် ဦးခွန်ထွန်းဦးပါမည်... မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်း သန်း ၃၀ စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိ... ဦးနု၏ တာတေစနေသား စာအုပ် အထူးရောင်းပွဲ... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းကာ ဆင်နွှဲမည်... အများလက်ခံနိုင်မည့် အချက်များကို စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ(ယာယီ) တွင် ထည့်မည်... တောင်သူ ၁၂၅ ဦး သစ်တောဥပဒေဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် တရားစွဲခံရ... ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စား လှယ်နှင့် တွေ့ဆုံ... မြန်မာပါလီမန် အဖွဲ့ ၀ါရှင်တန် သို့ သွားရောက်... ကချင်အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးရန် အဆင်သင့်ရှိနေ... ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နှစ်ဖက် စစ်ဦးစီးများ တွေ့ဆုံ ကြမည့်နေရာအတွက် ညှိနှိုင်းမှုမရသေး... ဘီဘီစီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရန် ဆန္ဒရှိနေ... ဘာသာအချင်းချင်း နားလည် ယုံကြည်မှုများဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း... ဟာ့ဂ်ျဗီဇာ အရေအတွက် ၅,၀၀၀ ရရှိ... လူသားတို့၏ ဘ၀လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်း အတွက် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ... ကမ္ဘာလှည့်များအတွက် အသေးစား ခရီးစဉ်တစ်ရပ် စီစဉ်... မုတ်သုံလေ၀င်ရောက်မှု နောက်ကျခြင်းကြောင့် အဏ္ဏ၀ါဂေဟ စနစ်များ အပေါ် ထိခိုက်မှုများအား စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ ရန်လို... မွန်မြတ်စိတ်ထား အသင်း တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်မည်... ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးတွင် စည်းကမ်းချို့ယွင်းနေ ပြီလော... တောင်သူ လယ်သမားပါတီ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထား... အရေးပေါ်လူနာ အသက်ကယ်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း အောက်တိုဘာလ၌ စတင်မည်... မြေစိုက်ကြော်ငြာဘုတ် စံအရွယ်အစား ကန့်သတ်လိုက်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာဘုတ်ငယ်များ ဖြုတ်သိမ်း ခိုင်းခြင်းက လုပ်ငန်းရှင်များကို ထိခိုက်မှုရှိ... ယခုနှစ် အတွင်း တောင်သူလယ်သမား ညီလာခံ ကျင်းပသွားရန်ရှိ... မွေး/ရေ လုပ်ငန်း၂၆ ခုကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်း ဖွဲ့ရန်ရှိ... အရစ်ကျကားရောင်းချမှု လူနည်းစုသာ ၀ယ်ယူနိုင်... ရွှေဈေး မြင့်ဆဲ... နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူကြမ်းတွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေသေး... ခေတ်သစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လာတဲ့ မြန်မာ... အမ်ပီယူ ဒေတာစင်တာ ဖွင့်လှစ်ပြီ... ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ နိုင်ဂရု(ပ်)၏ ကမ္ဘောဇ တာဝါ ထပ်မံ တိုးချဲ့ဆောက် လုပ်မည်... ဒေါ်လာခြောက်ဘီလျံတန် အပန်းဖြေ စီမံကိန်းကြီး စပိန်နိုင်ငံတွင် ပေါ်ထွက်ရန်ရှိနေဟုသိရ... တရုတ်နိုင်ငံမြို့များတွင် အိမ်ဈေးနှုန်းများ ထပ်မံမြင့်တက်... အသည်းရောဂါ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ရဟန်းသံဃာများအား လှူဒါန်းထိုးနှံပေးခဲ့... The First Mandalay Lifestyle Ladies Product Expo ပွဲကျင်းပမည်... မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်သို့ ခရီးသွား ၀င်ရောက်မှုပိုမိုများပြားလာ... တင်ချင်းဆက်အမြွှာကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးခွဲစိတ်မည်... တံတားဦးစီမံကိန်း ကနဦး အစီအစဉ် အတွက် လိုအပ်ပါကနိုင်ငံခြားပညာရှင်များခေါ်ယူမည်... တတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင် အိုးဘိုထောင်မှ အကျဉ်းသား၄၇ ဦးပါဝင်... ဒီမိုကရေစီနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး မီးပုံးပျံလွှတ်... ဆီစက်လုပ်ငန်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေ... မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို အဓိကဆုံရပ် တစ်ခု ဖြစ်လာ ရန် ဆောင်ရွက်မည်... သရုပ်ဆောင်များ အကယ်ဒမီအကဲဖြတ်အဖွဲ့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်လာခဲ့... တိုက်ခိုက်သူတွေကြောင့်၊ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် စိတ်ပျက်စရာအဖြစ် မခံနိုင်ဘူးလို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ရုပ်အဆိုးဆုံး အမျိုးသမီး... အဆိုတော်သားစိုး မြန်မာ့ပိုးထည်နဲ့ ချည်ထည်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်... မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့တွင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ရန်ကုန်ဂီတ လူငယ်များအဖွဲ့ 'ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့' ဂုဏ်ပြု ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပ... တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဂျပန်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးများ လုပ်ငန်းများခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းမည်... ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက မဲခေါင်မြစ်ရေ အငြင်းပွားမှုကိုသတိပေး... ခမာနီအစိုးရ၏ အထင်ကရအမျိုးသမီးအား ကမ္ဘောဒီးယားတရားရုံး က လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ... အာဖဂန်အမျိုးသမီး အသေခံဗုံးခွဲ... အာဆီယံ၏ ဒုက္ခသုက္ခများ နိုဝင်ဘာလတွင် ပြန်လာဦးမည် နေတိုးတပ်ဖွဲ့များ၏လက်ချက်ကြောင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အမျိုးသမီးရှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့... ဗီယက်နမ် လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ကျဆင်း... ဇင်ဘာဘွေတွင် တရုတ်က ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်... အခြေအနေမဲ့ အမျိုးသမီးများအား ပညာပေးသင်ပေးသူ ကုလဆု ရရှိခဲ့... တောင်အာဖရိက လုံမင်း ပလက်တီနမ်မိုင်းလုပ်သားများ လစာတိုးမှု ကိုလက်ခံပြီး သပိတ်မှောက် ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်း... အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့ပူးပေါင်းပြီး ပင်လယ်ဓားပြဆန့်ကျင်ရေး စစ်ရေးလေ့ကျင့်... လာဘ်စားခဲ့သည့် တရုတ်ရဲချုပ်အမှုကို ရုံးတင်စစ်ဆေး... တရုတ်နိုင်ငံရှိ စင်ကာပူပိုင်ကုမ္ပဏီတွင် ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွား... အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးကို ရှီကျင်ပင်း လက်ခံတွေ့ဆုံ
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 13 September 2012- Vol. 30, No.586" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၆ ၊ ၁၃-၉-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အချိန်တန်ပြီလော... ဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် လွတ်လပ်သော တရားစီရင်ရေး ခွဲခြား၍မရကြောင်း ဥပဒေပညာရှင်များဆို... အလုပ်သမားများ၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအချို့ ထပ်မံဖြစ်ပွား... ၂၀၁၃ နှစ်ဆန်းမှသာ ဗီဇာ မာစတာကတ်များ သုံးနိုင်မည်... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ခရီး ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့ စတင်မည်... သမ္မတနှင့် ပြည်သူများ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်စေရန် သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ပြည်သူ့အသံကဏ္ဍ ဖွင့်လှစ်ပေးထား... အဆိုးနှင့်အကောင်း ယှဉ်တွဲခဲ့သော စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေး... ကမာရွတ်မြို့နယ် လူသတ်မှု အိမ်ရှင်ဖြစ်သူအား အရေးယူ... ယခုလအတွင်း Western Union မှ တစ်ဆင့် ပြည်တွင်း သို့ ငွေလွှဲပို့ နိုင်တော့မည်... မဲမသမာမှုပြုလုပ်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ကို အမိန့်ချမှတ်... နိုင်ငံတကာ၏ သဘောထားသည် အကူအညီများထက် ပိုကောင်း... Debit Card စနစ် ဘဏ်ခုနစ်ခုက စတင်အသုံးပြု... ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်ဆင်နေ... နိုင်ငံတကာမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ၂,၀၀၀ ကျော် တက်မည့်ဖိုရမ် လုပ်ဦးမည်... တယ်လီ ကွန်အော်ပရေတာ နှစ်နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မည်... စီတန်း လှည့်လည် သည် ဆိုသူများကို အမှုဖွင့်ထား... အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ မိုးထိမိုးမိမှ အလုပ်သမားများအား တရားစွဲဆို... ကျူးကျော်နေထိုင်သူ များကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဖယ်ရှားပေးရန်မန်းမြို့တော်ဝန် ထပ်မံသတိပေး... ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နေသူများအပေါ် မတရားအသင်းဥပဒေ သက်ရောက်ခြင်းမရှိ... ဒေါ်လာခြောက်သန်းကိစ္စ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ငြင်းဆို... တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီး များနှင့် သမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံ... အမေရိကန်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးကောင်းစေရန် ထောက်ခံ... နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်း အချက် အလက်အချို့ ပယ်ဖျက်ကာ အတည်ပြု... ကေအိုင်အေက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပြီးမှ အပစ်ရပ်မည် ဆိုသဖြင့် ပစ်ခတ်မှု များဖြစ်ပွားနေဟု ကာကွယ်ရေး ဒုတိယ ၀န်ကြီး ပြောကြား... ရခိုင်ပြည်နယ်၌ မြန်မာနှင့် အင်ဒိုနီးရှား ကြက်ခြေနီအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မည်... နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများနှင့်အတူ လူထုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍများ၌ နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့များ ပိုများလာမည်ဟု မျှော်လင့်ထား... လာမည့် ရက်များတွင် ရွှေဈေးဆက်တက်နိုင်... တရုတ်ကုန်စည်ပြပွဲ ရှေ့လတွင် ကျင်းပရန်ရှိ... ရန်ကုန်ကားဈေးကွက် အပ်ကားဈေးနှုန်းများ အနည်းငယ်တက်... "ဆန်စပါးလုပ်ငန်း တိုးတက်ဖို့ အတွက် ငွေကြေး ထက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အသိအမှတ်ပြု အားပေးတာကို ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်"... ယခုနှစ် ရာသီဥတုနှင့် လာမည့်နှစ် ပို့ကုန်အခြေအနေများ... မြန်မာ့ပျားရည် ပြည်ပဈေးကွက်ဈေးကောင်းရရန် နည်းပညာများ မြှင့် တင်ကာ ပြည်ပစားသုံးသူ အကြိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်... Sweety Home & Living Products Expo ပြပွဲကျင်းပမည်... တံတားသစ်ကြောင့် မြောက်ဒဂုံ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ပြန်လည်လှုပ်ခတ် လာနိုင်... အိမ်သစ်ဆောက်လုပ်ရန် လိုအပ်မှုများကြောင့် ဘဂ္ဂဒက်တွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိ... ယူကေထိပ်တန်း ဗိသုကာဆုအတွက် အိုလံပစ်အားကစားကွင်း အလားအလာရှိနေ... အပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်း ရိုးရှင်းပေမယ့် အိမ်တွင်းပိုင်းကို လှပစွာပြင်ဆင်ထား တဲ့ သုဝဏ္ဏကလုံးချင်းတိုက်... ရွာများစွာ အားထားနိုင် မည့် ရွှေဆံနွယ် ဓမ္မဓရဆေးရုံကြီးဖွင့်မည်... ယခုလဆန်း ရွှေဈေး တစ်နှစ်တာ၏အမြင့်ဆုံးဈေးဖြစ်... လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးလိုပါက ကူညီသွားမည်... ရွှေဘိုမြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘက်စုံ စီမံချက် များ ရေးဆွဲအဆိုပြု... တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ ရုံးချုပ်ဖွင့်ပွဲ... စစ်ကိုင်းမြို့တော်၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ဟိုတယ်ဇုန်တစ်ခုပါဝင်... အမရပူရမြို့နယ် အထည်အလိပ် ရက်ကန်း လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ... ပါတီတွင်း ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖွဲ့များကို ဒီမိုကရေစီစနစ်အတိုင်း ဖွဲ့နိုင်ရန်တင်ပြထား... ကုန်ကားကြီးများ သိမ်းယူခံခဲ့ရသော အမှုကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး... လျော်ကြေးပြန်ပေးရန် နစ်နာသူ တစ်ဦးက တောင်းဆိုထားဟုဆို... ရွှေဘိုမြို့အရှေ့ဘက် ကျောက် မြောင်း မြို့ တွင် စီးပွားရေး အထူးဇုန်အတွက် အဆိုပြုထား... တရုတ်အလှ မယ်လေး သရဖူဆောင်းသွားတဲ့၂၀၁၂ ခုနှစ် မယ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲ... အနုပညာကို ဗန်းပြပြီး လိမ်လည်သူများ ရှိနေသည်ဟု အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌပြော... အာရှဆင်တွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကား ပြည်တွင်းမှာပြသနိုင်ဖို့ နေရာရှာနေ... အိန္ဒိယရိုးရာတေးဂီတတွေကို မြည်းစမ်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ 'ကာနေတစ်ည' ဖျော်ဖြေပွဲ
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)6September 2012- Vol. 30, No.585" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၅ ၊ ၆-၉-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးသစ် ဦးအောင်ကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း... နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းက ခရိုနီများ ကိုသာ အကျိုးရှိစေမည်ဟု အမျိုးသား လွှတ်တော် ၌ ဆွေးနွေး... ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအားလုံး နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ရရှိရန် လိုလား... ၀န်ကြီးဌာန ၃၃ ခုမှ ၃၁ ခုသို့ လျှော့ချ ဖွဲ့စည်းပြီး သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ခြောက်ဦးအထိ တိုးချဲ့ ခန့်အပ်... နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့် လိုင်စင်သိမ်းခံ ခဲ့ရသည့် ရှေ့နေများကို လိုင်စင်ပြန်လည် ထုတ်ပေး ရန် လိုလား... သုံးနှစ်အရစ်ကျ ငွေပေးသွင်းကာ အေအေတက္ကစီ ၀ယ်ယူနိုင်... မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်း ပူးပေါင်းမြှင့်တင်မည်... ပေါက်မြို့အနီး၌ စက်လှေတိမ်းမှောက်မှုတွင် တစ်ဦးသေဆုံး... သမ္မတအားထောက်ခံကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ တရားဝင် သုံးရက် ခွင့်ပြုသော်လည်း တစ်ရက်သာ တရားဝင်ဖြစ်ခဲ့... ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲမှသာ တိုင်းပြည် အမှန်တကယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ဟု မိုးသီးဇွန်အဖွဲ့ ပြောကြား... နှစ်ဖက်လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများမူကြမ်း အစိုးရနှင့်... ကေအင်န်ယူ သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့... ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးသစ်လက်ထက် စာပေလွတ်လပ်ခွင့် ပိုရနိုင်ရန် မျှော်လင့်... တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးများနှင့် သမ္မတ မကြာမီ တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထား... အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုကို ထုတ်ဖော်ကြေညာ... မြန်မာ့အာမခံဈေးကွက် Multi Polar စနစ်သို့ ပြောင်းရန်လို... အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပွဲ မတိုင်မီ ထိုင်းအဲအေးရှားက နေပြည်တော်သို့ တိုက်ရိုက်ဆွဲမည်... နေပြည်တော် ၁၁၅ မိုင်၌ အေဂျီဒီဘဏ်၏ ၂၄ နာရီ အသုံးပြုနိုင်သော အေတီအမ် စက်သစ် ဖွင့်လှစ်... မြန်မာ့လေကြောင်းအတွက် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ ထုတ် လေယာဉ်သစ် နှစ်စင်း နိုဝင်ဘာလတွင် ရောက်ရှိမည်... အမေရိကန်နှင့် အားကစား ဖလှယ်... အစိုးရနှင့် ကေအင်န်ယူ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခြင်း တိုးတက်မှုအနေအထားမှာ ပထမအဆင့် ခြေလှမ်းသာ ရှိနေသေး... အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရန် အစိုးရနှင့်... နိုင်ငံတကာက လုံလောက်သော ထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်ရန်လို... မွေးကင်းစ ကလေးငယ် တစ်ဦးအား တူးမြောင်းအတွင်း စွန့်ပစ်ထား မှုဖြစ်ပွား... လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် မိုးရေချိန် စံချိန်သစ်များရရှိ်... ကန့်သတ်ချက် များနှင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု များကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရန် ခက်ခဲ ဟု မြန်မာအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များပြော... ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်သံများပေါ်ထွက် ပြန်ပြင်ရန်လိုကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အကြံပြု... ကျပ် ၅,၀၀၀တန် မိုဘိုင်းဖုန်း ငွေဖြည့်ကတ် စတင်ရောင်းချမည်... မြရည်နန္ဒာမြို့သစ်ရှိ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြ သော မြေမှာ အစိုးရပိုင်မြေဟု မြေယာ ဌာနမှူးပြော... နိုင်ငံ၏ ရေသယံဇာတအား အကျိုးရှိစွာ စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ် ... ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ခရီးသွားဒေသ အချို့သို့ နိုင်ငံခြားသားများ လည်ပတ်ခွင့် ယာယီကန့်သတ်... ကျပ် ၃၈ ဘီလျံ ရှာဖွေပေးနိုင်ရန် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေ... ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများခန့်ထားရန် သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာပို့... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ယခုလ နောက်ဆုံးပတ်ခန့် ကျင်းပဖွယ်ရှိ... အငှားယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက် သင့်တော်မည့်ကား ရှားပါး... 'ဗ'အက္ခရာ ကားများ ဖျက်သိမ်းမည်... ရေကြီးမှုကြောင့် ဆန်ဈေးများ မတက်နိုင်... ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရန်ကုန်တွင် ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်... အေအေအငှားယာဉ်များ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံရောင်းချ... Far East မှ စင်ကာပူအိမ်ခြံမြေနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့... အငြင်းပွားလျက်ရှိသော ပုလဲကွန်ဒိုစီမံခန့်ခွဲခွင့် ကိစ္စ သာယာရေးကော် မတီဆောင်ရွက်နေ... ကျယ်ဝန်းသပ်ရပ်တဲ့ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံရှိတဲ့ ဒဂုံမြို့နယ်ထဲကအဆင့် မြင့်ကွန်ဒို... တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း ၅၀ တွင် အိမ်ရာဈေးနှုန်းများ ထပ်မံမြင့်တက် လာကြောင်း တရုတ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်... ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဖွင့်ခွင့် ပြုလိုက်သည့်အပေါ်၊ကျောင်းသား မိဘများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များက ကြိုဆိုကြ... အတွင်းတိမ်ဝေဒနာ ရှင် ၅,၀၀၀ ကို ကုသိုလ်ဖြစ် ခွဲစိတ်ကုသပေးနေ... အရေးပေါ် လူနာ တင် လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများ ရည်ရွယ်ထား... အာဆီယံ ရုပ်သေးပွဲတော်သို့ စိန်မွတ္တားဆိုင်းဝိုင်းနှင့် အတူ ထွေးဦး မြန်မာရုပ်သေးအဖွဲ့ သွားရောက် ကပြမည်... 'ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရန်' ယာဉ်စည်းကမ်းပါ စတစ်ကာများကပ်ပေး... သီတင်းကျွတ်မှ ငါးဈေးကွက် အရောင်း အ၀ယ် ပြန်လည်တက်လာ နိုင်ဟု ခန့်မှန်း... အရောင်းသွက်ရမည့် ရာသီချိန်တွင် နှမ်းအရောင်းအ၀ယ် အေးနေ... ပိုမိုအားစိုက်ထုတ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းပြမြေပုံ... ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များတည်ရှိရာ တကောင်းသို့ နိုင်ငံခြားသား လာရောက်မှု နည်းပါး... ကျူးကျော်ကိစ္စကြောင့် လက်တွန့်ကြရတဲ့ မြို့ကွက်သစ် အိမ်ခြံမြေ... ရွှေဘိုပဲ အထွက်နည်းသော် လည်း ရောင်းအားကောင်း... တောင်သူများ သမ္မတရုံးရှေ့ ဆန္ဒဖော် ထုတ်နိုင်ရန် တင်ပြ
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 30 August 2012- Vol. 30, No.584" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၄ ၊ ၃၀-၈-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: တွံတေးမြို့နယ်မှ လယ်သမားများက လွန်ခဲ့ သောနှစ် ၂၀ အတွင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော လယ်ယာ မြေများ အတွက် ပြန်လည်တောင်းဆို... "ကိုယ့်အမြင်နဲ့ မတူတဲ့သူဟာ အားလုံးမှားတယ် ဆိုပြီး စွပ်စွဲလို့ မရပါဘူး" -ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်... သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် သည်ဗွိုက်စ်အမှု စွဲချက်မြောက်မမြောက် စက်တင်ဘာတွင် ဆုံးဖြတ်မည်... လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ကိုက်ညီမည့် ဥပဒေပြုစုရန် လူမှုရေးအဖွဲ့များနှင့် လွှတ်တော် တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး... ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့် ကုလသမဂ္ဂ ၀န်ထမ်းသုံးဦး ကို သမ္မတအမိန့်ဖြင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးအပ်... ယခုနှစ်မိုးရာသီတွင် ရာသီတုပ်ကွေး ဘီအမျိုးအစား... ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများပြား... သဘင်ပညာရှင်များအစည်းအရုံး ပြန်လည်ရွေးကောက်မယ့်အစီအစဉ် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်... မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူအားလုံးကို သန်းခေါင်း စာရင်း ထည့်သွင်းကောက်ယူရန် ကုလသမဂ္ဂက တိုက်တွန်း... တည်ဆောက်ရန် လျာထားသည့် တံတားဦးမြို့သစ် စီမံကိန်းအတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၂၀၀ ခန့် ရရှိထားဟုဆို... မိုးသီးဇွန်နှင့် ကျောင်းသား ဟောင်းအချို့ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် ပြန်လာမည်... အသက်မပြည့်သော စစ်မှုထမ်းကလေးငယ် ၆၀၀ ကျော်အား... နုတ်ထွက်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ၄၀ ကျော်ကို ထပ်မံနုတ်ထွက်ခွင့်ပေးမည်... ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း... အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် မဲခွဲရာ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးကို စွပ်စွဲပြစ်တင်သည့်အဆို အနိုင်ရ... ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်းရေးကော် မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ စက်တင်ဘာအတွင်း ရခိုင်သို့သွားမည်... ကျပ် ၁၅ သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကို ပြန်လည်လက်ခံပြီး ငွေပြန်အမ်းရန် မဖြစ်နိုင်ဟုဆို... ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းအတွက် မြန်မာ လုပ်သားများအား သင်တန်းပို့ချ... ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံရေး သင်တန်းဖွင့်... ဗန္ဓုလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ ကားအစီးရေ ၁၀၀ ကို AA တက္ကစီ... ယာဉ်များအဖြစ် ပြေးဆွဲမည်... ကုန်သေတ္တာခွံ ၅,၀၀၀ ခန့်ထားသိုနိုင်မည့် ကုန်းတွင်း ကုန်သိုလှောင်စခန်းဖွင့်လှစ်... ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး နည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့ကို ငါးနှစ်အတွင်း အာဆီယံအဆင့်မီရန် ရည်မှန်း... ဘားအံမြို့ရှိ ကော့ဂွန်း သဘာဝလိုဏ်ဂူကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ရှိ... ဗေဒါ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း (၁၂)ကြိမ်မြောက် ကျောင်းဆင်း... နေရှင်နယ်လိဂ် နှင့် ဂျေလိဂ်တို့ ပူးပေါင်း... စက်တင်ဘာတွင် မုတ်သုံလေ ဆုတ် ခွာမည်ဟုခန့်မှန်း... မန္တလေး တမ္ပ၀တီရပ်ကွက် လူသတ်မှုအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေ... လွှတ်တော်သို့ လယ်ယာကိစ္စများ တင်ပြရန် ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း... နည်းပညာလိုအပ်ချက်ကြောင့် သားရေလုပ်ငန်း ဈေးကွက်မ၀င်... ဆန်စပါးအများပိုင်ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာရောင်းချ... ကနေဒါဝန်ကြီး လာမည်... ငါးရှဥ့်ဈေးနှုန်း စံချိန်တင်မြင့်တက်လာ... စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာများ ပေါ်ထွက်နိုင်ရေးအတွက် ဒုတိယအကြိမ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့... တရားစွဲဆိုမှု များကြောင့် လက်လုပ် အုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းရတော့မည်ဟုသိရ... မန္တလေးဧည့်လမ်းညွှန်အသင်းက ဖွင့်သည့်သင်တန်းကို ၀န်ကြီး အသိအမှတ်ပြုပေးရန်လိုလား... စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးစနစ်တွင် အလုပ်သမားဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှု အရေးကြီးလာ တောင်ပြုန်းပွဲတော်၌ ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်သူများ ယခုနှစ်တွင် နည်းပါး ဟုဆို အိုးပုတ်ဈေးရောင်းပွဲကျင်းပမြဲ... ' ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း'က ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်... ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ၍ စက်မှုဇုန်အောင်မြင်မှုနှေး ရာပြည့်(မန္တလေး)စာအုပ်အရောင်းပွဲ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့မည် ... စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရန် ချေးငွေစနစ်ပြုပြင်ပေးစေလို... ကသာခရိုင်မှတောင်သူများအား အမိုင်နိုသဘာဝမြေဩဇာ အခမဲ့ပံ့ပိုး မည်... ဆံမြိတ်ခုံ သို့မဟုတ်ဆီမီးခုံဒေသတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းဇုန်နှင့် တိုင်းဒေသ ကြီးအတွက် အကောင်းဆုံး ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်... ပုဂံမြို့သစ်တွင် ဟိုတယ်သစ် တစ်လုံး ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်နေ... ထိုင်းလေကြောင်း တစ်နေ့သုံးကြိမ်အထိတိုးချဲ့... ရန်ကုန်ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၏ စီနီယာ မန်နေဂျာကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ကန့်သတ်... ဆိုက်ရောက်ဗီဇာစနစ်ကို နှစ်နိုင်ငံ ထပ်မံတိုးချဲ့... နိုင်ငံသားပိုင် ဟိုတယ်များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်း... ဘန်ကောက်-မန္တလေး တိုက်ရိုက်လေကြောင်း ခရီးစဉ်ကို... အဲအေးရှားလေကြောင်း လိုင်းက အောက်တိုဘာလတွင် စတင်မည်... သူဌေးကျွန်းသို့ ပြည်တွင်း ခရီးသည်များအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေး... လာမည့် ခရီးသွား ရာသီ အတွက် ပြည်တွင်းလေကြောင်း လေယာဉ် လက်မှတ်ခ များ ဈေးမြင့်တက်... မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်လေဆိပ်တွင် ပါဆိုက်ရောက်ဗီဇာပေးရန် စီစဉ်နေ
Date of entry/update: 06 September 2012
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 23 August 2012- Vol. 30, No.583" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၃ ၊ ၂၃-၈-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: ဧရာဝတီနှင့် လားရှိုးရေကြီးမှုများအတွက် ကူညီရေး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေ... သာပေါင်း၊ ရေဘေးသင့်သူများ သောက်သုံးရေနှင့် အစားအစာ အကူအညီ လိုအပ် လျက်ရှိနေ... ကုလအတွက် ဒိန်းမတ်က ဒေါ်လာရှစ်သန်းထောက်ပံ့... မွေးကင်းစ ကလေး ကုသရေး ပစ္စည်းလှူဒါန်းရန် စီစဉ်... ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ကော်မတီများ ကြိုတင်ဖွဲ့စည်း... နှစ် ၅၀ နီးပါး သက်တမ်းရှိ စာပေ စိစစ်မှုကို ပယ်ဖျက် လိုက်ပြီးနောက် လူမှုဘ၀ ဆက်ဆံရေး တစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီ... မဟာမုနိ ဘုရားကြီးအလှူခံပုံးများအား ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှု ခြောက်လကြာ မှဂေါပက အဖွဲ့သိရ... ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးသည် ပြည်တွင်းရေးပြဿနာ သာဖြစ်ဟု သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့... စာပေစိစစ်ရေး အဆုံးသတ်မှု အလွန် မျှော်လင့်ချက်နှင့် မေးခွန်းများ... ခုံရုံးအနေဖြင့် တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမည်... ကုမ္ပဏီနှင့် မပြေလည်သေးသော လယ်သမားများ စက်မှုဇုန် လစ်လပ်နေရာများတွင် မိုးစပါးစိုက်ပျိုး... ၀န်ထမ်းများ လွတ်မြောက်လာမှု ကို ကုလက ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ကျန်ဝန်ထမ်းများကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန် တိုက်တွန်း... ဂိုးလ်ဒင်းမြန်မာ လေကြောင်းလိုင်း အစုရှယ်ယာများ လက်ခံမည်... ပြည်ပသင်္ဘောလိုင်းများရှိ မြန်မာသင်္ဘောသားများက တစ်နှစ်လျှင် 'ကန်'ဒေါ်လာ သန်း ၁၄၀ ခန့်ရှာဖွေပေးနေ... စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား မြေမြှုပ်မိုင်း အသိပညာပေးရန်လိုအပ်... ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတံတား တစ်စင်း ထပ်မံတည်ဆောက်မည်... ရှမ်းအင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ ဌာနချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်... ထေရ၀ါဒ ဓမ္မကွန်ရက်ဖွဲ့မည်... မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကူးတို့လိုင်းငါးလိုင်း ဈေးနှုန်းမတက်... ချင်းပြည်နယ်တွင် ခရီးသွားနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း အလားအလာ ကောင်း... ဥပဒေရေးရာအထူးပြုမဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေမည်... အငှားယာဉ်များ ကိုသာ အေအေ နံပါတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်... လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် လယ်ယာမြေဧက ၈၀၀၀ ခန့် သိမ်းခံရဟု ဒေသခံ များ ကန့်ကွက်ပြောကြား... အရင်းအနှီးဈေးကွက် ဥပဒေပိုင်း ဂျပန် ကူညီမည်... မြန်မာစာပေလောက နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ လှမ်းမျှော်... ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားသည့် လူနာများပြားလာ... အခွန်နှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်း ကဈေးကွက် ပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု များနိုင်ကြောင်း သိရ... ဈေးကွက်တွင်း ကားနှင့် စလစ်ဈေးများ အနည်းငယ်တက်လာ... မန္တလေးတွင် ဘာသာခြား ဆရာတော်များ ပူးပေါင်း၍ ပရဟိတဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေ... ကားပါမစ်ဈေးမြင့် လာ၍ မော်ဒယ်နိမ့် ကားများ ဈေးမြင့်လာ... သွေးလှူရှင်များအတွက် ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနိုင်ရန် အလှူရှင်များ လိုအပ်လျက်ရှိ... မန္တလေးတွင် ဩဂုတ်လအတွင်း ဂျပန် ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကျင်းပမည်... ကျားထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေတွင် စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေမှုက ကျားများ၏ ရပ်တည်မှုကို ခြိမ်းခြောက် လာလျက်ရှိနေ... အင်းလေးကန်အတွင်းတွင် ငါးမဖမ်းရဇုန်နေရာများကို သတ်မှတ် သွားရန်ရှိ... မန်းနှင့် ကွန်ဒို ယဉ်ကျေးမှု နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း အသားကျလာနိုင်... မိသားစု နည်းနည်းနဲ့ မြို့လယ်ကောင်မှာနေနိုင်မယ့် ပြင်ဦးလွင်က လုံးချင်းတစ်ထပ်တိုက်... အင်းလေးကန်ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ကလောချောင်းကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားမည်... ရတနာပုံ ဒိုင်းမွန်းပလာဇာ ယခုလ ၁၅ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်... အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် (မြောက်ပိုင်း)ရဲ့လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူထုကို အသိပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်... ဩဂုတ်၊၂၆ မှာ ပြုလုပ်မယ့် ဟစ်ပ်ဟော့ရှိုး... နှစ်၂၀ ကျော်အကြာမှာ မိခင် တစ်ဦးက ဖော်ထုတ်ပေး ခဲ့တဲ့ အေဘီ အက်စ်ဒီအက်ဖ် (မြောက်ပိုင်း) စခန်းရဲ့ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ် အတွေ့အကြုံ... မန္တလေးမြို့မှ ဘန်ကောက်နှင့် ဂါယာသို့ အမ်အေအိုင်ဆွဲမည်... ပုဂံမြို့သစ်တွင် ဟိုတယ်သစ်တစ်လုံး ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်နေ... ရန်ကုန်ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၏ စီနီယာ မန်နေဂျာကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ကန့်သတ်... ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ စနစ်ကို နှစ်နိုင်ငံ ထပ်မံတိုးချဲ့... နိုင်ငံသားပိုင် ဟိုတယ်များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်း... ဘန်ကောက်-မန္တလေး တိုက်ရိုက်လေကြောင်း ခရီးစဉ်ကို အဲအေးရှားလေကြောင်းလိုင်း က အောက်တိုဘာလတွင် စတင်မည်... သူဌေးကျွန်း သို့ ပြည်တွင်း ခရီးသည်များအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေး... လာမည့် ခရီးသွား ရာသီအတွက် ပြည်တွင်းလေကြောင်း လေယာဉ်လက်မှတ်ခများ ဈေးမြင့်တက်... မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်လေဆိပ်တွင် ပါဆိုက်ရောက်ဗီဇာပေးရန် စီစဉ်နေ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပညာတတ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက် တရားရုံးများမထီမဲ့မြင်ပြုမှု ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍... နတ်မောက်သားနဲ့ ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါသူများ... ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်လိုလျှင်... ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်း ပျောက်သွားခြင်းတဲ့လား... မည်သူမဆို... မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများအတွင်းပေါ်ပေါက် လာနေသော လူလူချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ... ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေဆိုတာ ဥပဒေဟုတ်ရဲ့လား... မြန်မာ-ထိုင်း... ချစ်ကြည်ရေးတံတားရှိရာ မြ၀တီမြို့... 'လှေကလေးကိုလှော်မည်၊ ဘေးမသမ်းဘဲ... အေးချမ်းတော့သည်' သီချင်း ဆိုပါလေဦး ကြီးကြီး... ဘိလပ်ပြန်သန်း... စာနယ်ဇင်းကောင်စီများ-အင်ဒိုနီးရှား၏ အတွေ့အကြုံ.. သစ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သစ်... စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေမှုနဲ့ကုတဲ့ ဆရာဝန်လူရွှင်တော်အဖွဲ့... ရိုးသားသည့်ဂုဏ်... ကုဋေတစ်သန်းမကတဲ့ ခြေတစ်လှမ်းအစ... ဘကြီးညို၏ အောက်ကစ... တရားခံဖြစ်သွားသော တရားသူကြီး... လူဦးရေ အချိုးအစား ပြောင်းလဲမှု၏ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အာရှသည် မချမ်းသာခင် အိုမင်းနေ ပြီ... ရေအားလျှပ်စစ်... နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးခင်ဗျား... မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစားသည်သာ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်... ဟစ်၍သာခေါ်လိုက်ချင်တော့တယ် ဆရာရေ... ဂရန်တီနှင့် ၀ရန်တီ (Guarantee & Warranty)... ထားသင့်တဲ့ဝါဒ အာမခံ ဆင်ဖိုနီ... သုညတွေဆီ လက်တွဲ လျှောက်လှမ်းရမယ့်ခရီး... ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် အနာဂတ်ခရီး... ၂၁ ရာစုနှစ်တွင် ဗဟုသုတ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ... ငါးရဖို့က အဓိက... စီးပွားရေး အလားအလာကောင်း များနှင့် တွေ့ကြုံရမည့် အခက်အခဲများ... အိတ်ဖွင့်ပေးစာ... အံ့မခန်း ထမ်းဆမ်းလိုဏ်ဂူတော်... မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ကျရေး ရည်မှန်းချက်... ဈေးနှုန်းတက်တိုင်း မြတ်သလား
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 16 August 2012- Vol. 30, No.582" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၂ ၊ ၁၆-၈-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)9August 2012- Vol. 30, No.581" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၃၀ ၊ အမှတ် ၅၈၁ ၊ ၉-၈-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)2August 2012- Vol. 29, No.580" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၈၀ ၊ ၂-၈-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 26 July 2012- Vol. 29, No.579" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၉ ၊ ၂၆-၇-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 19 July 2012- Vol. 29, No.578" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၈ ၊ ၁၉-၇-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 12 July 2012- Vol. 29, No.577" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၇ ၊ ၁၂-၇-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)5July 2012- Vol. 29, No.576" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၆ ၊ ၅-၇-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 27 June 2012- Vol. 29, No.575" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၅ ၊ ၂၇-၆-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 21 June 2012- Vol. 29, No.574" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၄ ၊ ၂၁-၆-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 14 June 2012- Vol. 29, No.573" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၃ ၊ ၁၄-၆-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)7June 2012- Vol. 29, No.572" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၂ ၊ ၇-၆-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Date of publication: 07 June 2012
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 31 May 2012- Vol. 29, No.571" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၁ ၊ ၃၁-၅-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 24 May 2012- Vol. 29, No.570" မြန်မာတိုင်း(မ်) အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၀ ၊ ၂၄-၅-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 17 May 2012- Vol. 29, No.569"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၉ ၊ ၁၇-၅-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ်တွင် တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ၎င်းလိုလားချက်များကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့... ထိုင်းအစိုးရက မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စွပ်စွဲချက် အပေါ် ပြည်တွင်း၌အစစ်ဆေးခံရန် ဒီကေဘီအေခေါင်းဆောင် အဆင်သင့်ရှိ... တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်... ဇွန်လကုန်တွင် သတင်းဂျာနယ်များအားလုံး စိစစ်ရေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပေး မည်... ဖယောင်းသုတ်မှု တိုင်ကြားချက်မှာ ရုံးခွဲများ၏ တင်ပြချက်အပေါ် မူတည်တိုင်ကြားခြင်းဟုဆို... အင်အားကြီးပါတီသုံးခုက ညီလာခံ ကျင်းပ ရန် စီစဉ်နေ... ဘုရင့်နောင်တံတား ဖြတ်သန်းအသုံးပြုခ သာမန် တံတားအဆင့် နှုန်းထားအတိုင်း လျှော့ချ သတ်မှတ်ပေး ရန် တောင်းဆို... ရွှေနံ့သာ လယ်မြေနေရာ တွင် နှစ်ဖက်စလုံးအား လုပ်ကိုင်ခွင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ တားမြစ်ထား... သက်ကြီးရွယ်အို များအတွက် ပေါ်လစီ ချမှတ်တော့မည်... 'အသည်းအေးတဲ့ ဘဲလေး'အကကို ပရိသတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူ ကွယ်လွန်... ပြည်သူများက အပြောင်းအလဲ လိုလားနေကြောင်းကို ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲက ပြသခဲ့ဟု သမ္မတပြောကြား... ပထမဆုံး ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အိုင်အယ်လ်အို တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး... ခြစားမှုများ အား မီဒီယာများက တိုက်ဖျက်ရန် ပိုလန်ဝန်ကြီး တိုက်တွန်း... ရေကြောင်းအဖွဲ့၏ စံစာရင်း၌ အချိန်မီပါရှိရေး သင်္ဘောသားများ စိုးရိမ်... အပြောင်းအလဲကာလမှာ ပိုမိုပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ကဏ္ဍ... စစ်ဘေးသင့် ကချင်ပြည်သူတို့ မိုးကာလ ရှင်သန်နိုင်ရေး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းခြောက်ခု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု... ကွဲကွာနေသော မိသားစုဝင် များ ကြက်ခြေနီ အသင်းက ရှာဖွေပေးမည်... ပျူမြို့တော်သုံးခုအား ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအမီ ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်... မြန်မာ့ကြွယ်ဝမှုများကို နိုင်ငံတကာသို့ လက်ကမ်းလိုက်ပြီ... တရုတ်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ထပ်မံ ၀င်ရောက်လာမည်... ရာသီကုန်ချိန်ထိ မြေပဲဆန်တရုတ်ဝယ်လက် ရှိမည်မှန်း... ဇောတိက စီမံကိန်းအတွက် စာချုပ်များ ချုပ်ဆို... ကားတင်သွင်းမှု မူဝါဒအပြောင်းအလဲကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း အက်ဖ်အီးစီ လဲလှယ်နှုန်းများ မြင့်တက်လာ... ဈေးကွက်တွင်း ကားဈေးနှုန်း ဆက်လက် ကျဆင်းဖွယ်ရှိ... လိုင်စင်ရကန်ထရိုက် လုပ်ငန်းအာမခံကြေး ကျပ်သိန်း ၅၀၀ သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်... လိုင်းနှစ်လိုင်း အင်တာနက်လိုင်းပြည့်၊ အခြားလေးလိုင်း အင်တာနက် ဆက်လက်ခံ... အချိန်ပိုင်းသာ မီးလာပေမယ့် မီတာကြေးကိုမူ ယခင်လများ ထက် နှစ်ဆနီး ပါး ပေးနေရ... မြန်မာ့ရိုးရာရွှေထီးလုပ်ငန်း မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းအဖြစ်သာ ရှိနေ... 'န' ၊ 'ပ' အက္ခရာပြီးက တက္ကစီနှင့်စီးလုံးငှားယာဉ် ကားသစ် လဲခွင့် မသေချာသေး... ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသစ်မှ တောင်းဆိုချက် ရှစ်ချက်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့... တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် စစ်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဟု တရုတ်ဆို... ဖိလစ်ပိုင်ဆန္ဒပြမှု တရုတ်နိုင်ငံသားများအား သတိပေး... နီပေါနိုင်ငံတွင် လေယာဉ်ပျက်ကျ၍ ၁၅ ဦး သေဆုံး... ၀ါသနာအရင်းခံ ဘန်ကီမွန်း ဘောလုံးပွဲတွင်ချော်လဲ အရိုးအက်... မြို့တော် ဂျကာတာမှ စည်းကမ်းချိုးဖောက်၍ ၀င်ငွေ ရှာနေသော 'ဂျော်ကီ' နှင့် ကိုယ်ပိုင် ယာဉ်မောင်းများ... အာဖဂန် ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းရေးမှူး ကဘူးလ်တွင် ပစ်သတ်ခံလိုက်ရ... အမေရိကန် သွားမည့် လေယာဉ်ကို ဖောက်ခွဲရန် အယ်လ်ကေဒါ အဖွဲ့၏ အကြံအစည်ပျက်ပြားသွား... နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟိုတယ်များ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 10 May 2012- Vol. 29, No.568"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၈ ၊ ၁၀-၅-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်။
Description/subject: ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရာ၌ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရန်လိုအပ်... ကြည့်မြင်တိုင် စက်ဆန်းတစ်ရွာလုံးရှိ သမ္ဗန်များ အား ပြေးဆွဲခွင့် ပိတ်ထား... ၂၀၁၂-၁၃ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်ကို တစေ့တစောင်း ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်းနှင့် လူတိုင်း သာတူညီမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကြံပြုချက် အချို့... မြန်မာ၏ အနာဂတ်ကို လေးလေး နက်နက် မျှော်လင့်ထားဟု ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲ ဘန်ကီမွန်း ပြောကြား... ယခုနှစ် မုတ်သုံရာသီ ကာလ၌ မိုးရွာသွန်းမှု အားကောင်းနိုင်... သင်္ကြန်ပွဲ ဗုံးခွဲသူ သေဒဏ်ချမှတ်... အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို လေ့လာ သွားမည်... ဇေကမ္ဘာမှ ယူထားသော လယ်မြေများပေါ်တွင် မိုးစပါးပြန်စိုက် မည်ဟု မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရွှေနံ့သာ စံပြကျေးရွာမှ လယ်သမားများက ကြေညာ... ပိုလန်က ပညာသင်ဆုပေးရန် မြန်မာနှင့်နားလည်မှုစာချုပ်ချုပ်ဆို... ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များတွင် ဖယောင်းသုတ်ထားသည်ဟု NLD ၏ စွပ်စွဲမှုကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မှန်ကန်မှု မရှိဟု သတင်းထုတ်ပြန်... နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်... မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတော့အိတ်ချိန်း တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရေး တိုကျို စတော့အိတ်ချိန်းနှင့် စတင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်... ကုလသမဂ္ဂ ခရီးသွားအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ဝင်ရန် သမ္မတက တရားဝင် ဆန္ဒပြုတောင်းဆို... သတင်းသမားများအား ကာကွယ်ပေးမည့် ဥပဒေ ပေါ်လာရန် ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာများ တောင်းဆို... ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် အခမ်းအနားကို ပထမဆုံးကျင်းပ... ဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်၏ ပထမအကြိမ် ညီလာခံကျင်းပ... လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းတွင် မသန်စွမ်း သူများလည်း ပါဝင်နိုင်ခွင့် ရှိရန် လိုအပ်... မောတောင်နှင့် မဲ့စဲနယ်စပ်ကုန်သွယ် စခန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် သွားမည်... လေပြင်းနှင့် မိုးကြိုးပစ်မှုများကြောင့် သေဆုံး ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်... အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရန် အလုပ်သမားများတောင်းဆို... စီးပွားရေးဆိုက်ရောက်ဗီဇာကို ဇွန် ၁ ရက်နေ့ စပေးမည်... လူမှုဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းနှစ်ခု ရေးဆွဲလျက်ရှိ... မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသားများ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်း... ၄၄ နှစ်ပြည့် မောင်မောင် ဆိုလေ ထီးရိုးရှည်အဖွဲ့သံချပ်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့...
Date of entry/update: 12 May 2012
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)4May 2012- Vol. 29, No.567"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၇ ၊ ၄-၅-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ထဲရောက်ပြီ အင်န်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ် များ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆို... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကုလအကြီးအကဲ ချီးကျူးကြိုဆို... ဥရောပသမဂ္ဂက ကျေးလက်ဒေသ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်... သက်တမ်း နှစ် ၂၀ ကျော်ကားများ မရှိတော့ သည်အထိ ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်းများ အပ်နှံမှုကို အမြဲတမ်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်... ဒုက္ခသည် များ နေရပ်ပြန် ရန် နိုင်ငံသားခံယူ ခွင့် ပြန်လည်ရရှိရေး အရေးပါသည်ဟု ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အလေးထားပြောကြား... စစ်ဘေးသင့်သူများအတွက် အလှူရှင်များ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည်... လွှတ်တော် တတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးများ နှစ်ရက်ထပ်မံ ရွှေ့ဆိုင်းပြီး ပြီးဆုံးခဲ့... လိုင်ဇာကို သိမ်းပိုက်မည် မဟုတ်ဟုဆို... အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်တက်ရောက်သည်ကို ၀မ်းမြောက်ကြိုဆိုကြောင်း ဟီလာရီကလင်တန် ပြောကြား... မြန်မာအား ကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိဟု ဂျာမနီဝန်ကြီး ပြောကြား... လွန်ခဲ့သော ၁၄ နှစ်က သိမ်းယူခံခဲ့ရသည့် လယ်ယာမြေများအတွက် လယ်သမားများက နစ်နာကြေး တောင်းဆို... အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့များကို အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေး... ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကုလ၏ အကူအညီများ ရပ်ဆိုင်းထားရ... ရန်ကုန်မြို့မီးပေးရေး ၂၅ မဂ္ဂါဝပ်ထွက်ရှိမည့် 'ကန်'လုပ် ယာဉ်တင် ရွေ့လျား မီးစက်လေးလုံး ငှားရမ်း အသုံးပြုမည်... အာမခံလုပ်ငန်းကို ပုဂ္ဂလိကအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတော့မည်... သူတို့ပြောတဲ့ ရေတစ်စက်ရဲ့တန်ဖိုး... မြို့တော်စည်ပင် အငှားယာဉ်များ အငှားချထားမှု ရပ်ဆိုင်း... အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံအား ကြွေးကျန်များ ပေးဆပ်ပြီးလျှင် ကူညီမည်ဟုဆို... (၆၄)ကြိ်မ်မြောက် တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ဘွဲ့တံဆိပ် ဆက်ကပ်ပွဲကျင်းပမည်... အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ဖောင်ဒေးရှင်းကို ဆရာဝန်အသင်းမှ ဦးစီးတည်ထောင်သွားမည်... ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆဲလ်အစားထိုးကုသမှုကို ပိတ်ပင်လိုက်သည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဆေးကုသစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားလာ... အရှေ့တောင်အာရှတွင် ကာလကြာရှည်ဖြစ် ပွားနေသော ပဋိပက္ခများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကောင်းများထွက်ပေါ်... အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တင်မဟုတ်ဘဲ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရသည် အထိ ဆောင်ရွက်မည်... ကမ္ဘောဒီးယားမှ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြန့်ပွား လာသော ဆေးယဉ်လာသည့် ငှက်ဖျားရောဂါပိုး... ဒဂုံဆိပ်ကမ်းတွင် ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှော ဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့... World Press Freedom Day - May 3, 2012ကမ္ဘာ့သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့... အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခွင့်အတွက် ပွင့်လင်းစွာ တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်လာ... ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင် ငါးဈေးနှုန်းများ သိသာစွာ ကျဆင်းလာ... ပြည်ပပို့ဆန်အချို့ သတ်မှတ်စံမမီ ၍ ဈေးလျှော့ရောင်းချခဲ့ရ... အသစ်ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံး လိုက်သော ငွေလဲနှုန်းရှင် စနစ်ကြောင့် နိုင်ငံ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာ ရှိလာနိုင်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများသုံးသပ်... မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂေါက်သီးသမားများအတွက် အနာဂတ်ကောင်းကိုတွေ့နေရ... အမေရိကန်နှင့် ဗီယက်နမ် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 26 April 2012- Vol. 29, No.566"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၆ ၊ ၂၆-၄-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်။
Description/subject: ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ နောက်ပြန် လှည့်သွားမည် မဟုတ်ဟု သမ္မတ ပြောကြား... မြစ်ကြီးလေးစင်းတွင် ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်းများ တားမြစ်မှုကို ပတ်ဝန်းကျင်ချစ်သူများ ကြိုဆို... ကိုလိုနီခေတ် လက်ရာ အဆောက်အအုံတွေ ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အချို့လည်း စိတ်ဝင်စား... အီးယူက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားမှုများကို ဆိုင်းငံ့ လိုက်၊ မြန်မာ နိုင်ငံကို ကူညီရန် ယူရိုသန်း ၂၅၀ လျာထား... လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ ပြန်ကျင်းပ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အင်န်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခြင်းမရှိသေး... အင်န်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ် တို့ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး အမြန် စလုပ်သင့်ဟု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှုမြင်... အဖက်ဖက်မှ မျက်နှာသာပေးခံရမှုများကြောင့် အင်န်အယ်လ်ဒီ အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဟု ဗမာနိုင်ငံရေး မိတ်ဆွေပါတီများက ဆို... အခြားနိုင်ငံတွေ က ပဋိပက္ခတွေကို အစိုးရလူကြီးပိုင်း လေ့လာဖို့လို... စီးပွားကူးသန်း အငှားယာဉ်များကို အမည်ပေါက် ယာဉ်မောင်း များကိုသာ ထုတ်ယူခွင့်ပြု... မီးလောင်ခဲ့သော ဟေမ၀န်ဈေးကို နှစ်လအတွင်း အပြီး ပြန်ဆောက်မည်... အာဆီယံသိပ္ပံ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှဖိတ်ခေါ်... ဧပြီလနှောင်းပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်... ဥရောပသမဂ္ဂရုံးခွဲ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်... ထူးဖောင်ဒေးရှင်းက ပူတာအို တွင် ကျေးဇူးဆပ်သည့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပ... မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသားများ အသင်းကို အဖွဲ့ချုပ် အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် မည်... ရွှေပါရမီ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရှင်သာမဏေအဖွဲ့သို့ လစဉ်ထောက်ပံ့... တိုင်းရင်းသားဒေသများနှင့် အတူ လိုအပ်နေသောနေရာများတွင် စားနပ်ရိက္ခာ များ ကူညီသွား မည်... မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တွင် ပြောင်းလဲမှု အမျိုးအစားသည်သာ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်... ဘုရင့်နောင်တံတားဖြတ်သန်းခ အား နှုန်းထားသစ် သတ်မှတ်... ဆန်တန်ချိန်တစ်သန်း ပြည်ပ တင်ပို့နိုင်ရန် မျှော်မှန်း... ငွေလဲလှယ်မှု နှုန်းရှင် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော်လည်း ပို့ကုန်ကဏ္ဍတွင် ပြောင်းလဲမှုမရှိဟု လုပ်ငန်းရှင်များပြော... ဘယ်လာရုစ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေး နှင့် နည်းပညာပိုင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို... သင်္ကြန်အပြီး အိမ်ခြံမြေဈေး ကွက် စတင်လှုပ်ရှားမှုများက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများကြောင့် မေလတွင် ပိုမိုအရှိန်ရလာမည်ဖြစ်... မန်းသင်္ကြန်၌ အိတ်ဇောဖြုတ် ဆိုင်ကယ် စီးရေ ၁၃၀ ကျော်ကို အရေးယူ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း... မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်ပြီး ဆန်အိတ်ပိ၍ ၁၀ ဦး သေဆုံး... ယခုနှစ်မန်းသင်္ကြန် ကျုံးအနောက်ဘက်၌ အထူးစည်ကားခဲ့... ဗုဒ္ဓနည်းကျ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာသင်တန်းကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြ... တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် အမှတ်တရ ဂီတဆည်းဆာပွဲကျင်းပမည်... ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသစ်မှ နာယကရှစ်ဦး တင်မြှောက်... ပစ်က ဂျိုလီကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံလိုက်ပြီ... ဗစ်တိုးရီးယား ဒီဇိုင်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဒေါ်လာ ၁၂၈,၀၀၀ တန် Range Rover ကား...
Date of entry/update: 26 April 2012
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 23 April 2012- Vol. 29, No.565"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၅ ၊ ၂၃-၄-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: အီးယူက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေး ယူမှုများကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းပေးထားရန် ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ် အကြံပြု... မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲမှုများအတွက် အမေရိကန် General Electric ကုမ္ပဏီကြီး ကူညီမည် ဟုဆို... ကေအင်န်ယူနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေး... အမေရိကန်အစိုးရ၏ မူဝါဒပြောင်းလဲရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး မည်ဟု ဂျင်မ်ဝက်ဘ်ပြောကြား... အီးယူက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ပင်ထား မှုများ ဖယ်ရှားရန် အိုင်အယ်လ်အိုအစီရင်ခံစာပေါ် မူတည်နေ... ယခုလအတွင်း ဒဲရစ်မစ်ချယ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထပ်မံလာမည်... လွှတ်တော်တွင်း အာဏာရ ပါတီ ကြီးနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်များအကြား အင်အားမျှလာနိုင်... ကေအင်န်ယူနှင့် အမြင်ချင်းတူသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၃ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်တက်မည်... လွှတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေး ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား များ ပြောကြား... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ထဲရောက်ပြီ... တိုင်ရီ စက်ရုံ အလုပ်သမားများ အခြေခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း... ငြိမ်းချမ်းရေး နီးသလား... ယူနန်မှ မင်္ဂလာမဂ္ဂဇင်းတိုက် ရုံးခွဲလာရောက်ဖွင့်လှစ်မည်... ပန်းချီဆရာ သင်းလုံးကျွတ်ညီလာခံကို ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပရန် စီစဉ်နေ... ရွှေတိဂုံစေတီကို အဆင့်မြင့်မွမ်းမံ... နာမည်ကျော် ဂျာမန်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှ မိနစ် ၉၀ စာ ဇာတ်လမ်းပိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရိုက်ကူးနေ... ဖုန်းကတ် ပျောက်ဆုံးလျှင် ကျပ်နှစ်သောင်းဖြင့် တစ်ပတ်အတွင်း ရနိုင်... ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းစနစ် မြှင့်တင်ရန် လို... ငွေလဲလှယ်မှု နှုန်းရှင်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းသည် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို များစွာသက်ရောက်မှု မရှိ... ကိုရီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ၀င်ရောက်ရန် ရှိ... မြန်မာလယ်ယာ စီးပွား အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်း... FAO မှ တောင်ကြီး မြို့တွင် သရက်စိုက်တောင်သူများကို သီးထိုးယင် ကာကွယ်ရေး သင်တန်း ပို့ချပေးသွားမည်... သတင်းထောက်အေးသူစံအား ဆံပင်ဆွဲ ပါးရိုက်မှုအတွက် ထက်ထက်မိုးဦး ဒဏ်ငွေကျပ် တစ်ထောင် ပေးဆောင်ရ... သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ 'မဟာမှိုင်း၏ ဩ၀ါဒကထာ'... ပန်းချီ ၊ ပန်းပု ပညာရှင်များ သမဂ္ဂရဲ့ရန်ပုံငွေ ပန်းချီပွဲ...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)5April 2012- Vol. 29, No.564"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၄ ၊ ၅-၄-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်နေပါတယ်... ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အသံများ... ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ကို ပုံမှန် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ... မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များနှင့် သင်္ကြန်ရေပက်ခံထွက် သူများ လိုက်နာရန်နှင့် ရှောင်ကြဉ်ရန် အချက် (၃၉)ချက်ထုတ်ပြန်ထား... ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် အလှည့်ကျ မီးပေးမှု ပြန်လည်စတင်... ဂျွန်ဟော့ကင်း တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ... ဧပြီရဲ့ပထမဆုံးရက်မှာ ရင်ခုန်သံ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်ခဲ့တဲ့ နေပြည်တော် သီရိ လေးမြို့နယ်... ကော့မှူးတစ်မြို့လုံးအပျော်တွေဖုံးလွှမ်းခဲ့တဲ့နေ့... ပြည်သူတို့ရဲ့ အောင်ပွဲ...၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ... ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အလွန် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအားလုံး ညီညွတ်ကြရန် ကျွမ်းကျင်သူများ သတိပေးတိုက်တွန်း... အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဒုတိယ အင်အား အကြီးဆုံး နိုင်ငံရေး ပါတီဖြစ်လာမည်... အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ရသော ရှမ်း(မြောက်)ရွေးကောက်ပွဲ ကျားဖြူဗိုလ်စွဲ... မဲပေးဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြပေမယ့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ မဲပေးခွင့်မရကြ သူတွေရှိ... ပြဿနာတချို့နဲ့ကြုံခဲ့ရပေမယ့် လွတ်လပ်မျှတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ လှည်းကူးမြို့နယ်ထဲက ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ... ပြည်သူ့ ဆန္ဒနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်က ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ... အားပြိုင်မှ ဒီမိုကရေစီဆိုပေမယ့် ကောင်းသောအားပြိုင်မှုသာဖြစ်သင့်... မိုးရေတစ်စက်ချင်းမှသည် ...ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့... ကုလသမဂ္ဂ၏ ဒုတိယမြောက်ထောက်ပံ့ရေး ယာဉ်တန်း ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေသို့ ထပ်မံ သွားရောက်ခဲ့... ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံ တွင် ခြောက်ထပ် ဆေးကုသဆောင် သစ် ထပ်မံဖွင့်လှစ်... လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေသစ်ပေါ်လာလျှင် အလုပ်သမားများ နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများတွင် ကုသနိုင်မည်... နာရေးကူညီမှုအသင်းဆေးခန်းတွင် မျက်စိခွဲစိတ်ခန်း ဖွင့်လှစ်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေ... မြန်မာများ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရုပ်ရှင် သွားရောက် ရိုက်ကူး... မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျာမန်ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ လာရိုက်ကူး... အရေးပေါ်သွေးသွင်းကုသရန် လိုအပ်နေသူများ အတွက်သွေးမေတ္တာ ပရဟိတအသင်းမှ အကူအညီပေးနေ... ရေ၀န်းဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး မူလတန်း လွန်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ဂျပန်အစိုးရထောက်ပံ့...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 29 March 2012- Vol. 29, No.563"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၃ ၊ ၂၉-၃-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်နေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ... တန်ဖိုးရှိတဲ့ မဲတစ်ပြား ပယ်မဲလေးတော့ မဖြစ်စေချင်... မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှ တစ်သီး ပုဂ္ဂလ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးခင်လှိုင်(ဇောတိက)... လွတ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် မီဒီယာ ပါဝင်စေလို... ရွေးကောက်ပွဲကို ဥပဒေနှင့် အညီ စောင့်ကြည့် လေ့လာသွားမည်ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား များ ပြောကြား... "ဆိုးဆိုးရွားရွား မဲညစ်မှုတွေတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်"... ဥပဒေနှင့် မညီသည့် ကြိုတင်မဲလျှောက်ထားမှု များကို စိစစ်ပယ်ချ... ၀န်ထမ်းအများစု လွတ်လပ်စွာ မဲပေးလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်... မရမ်း ကုန်းမြို့နယ် မှ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးခင်လှိုင်(ဇောတိက)... ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း... ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ သန်းထိုက်ဦး... မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဘာသာစုံ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပ... "ရာစုနှစ် တစ်ဝက်ကျော် လျစ်လျူရှု ခံထားရတဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ သူ့နေရာကို ပြန်လည်ရရှိလာတော့မှာပါ"... ဧပြီလ ၁ ရက်မှစတင်၍ အခွန်နှုန်းထားများ ပြင်ဆင်ကောက်ခံမည်... ရွှေလီသို့အလုပ်သွားလုပ်သည့် တရားမ၀င် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးပြန်ပို့ခံရ... အွန်လိုင်း မှလျှောက် ထားနိုင်မည့် အီးဗီဇာ စနစ် ဧပြီလ ၁ ရက် စတင်စမ်းသပ်မည်... အစိုးရ ၏ဆောင်ရွက်ချက် ဥပဒေနှင့် ညီရန်လို... သဘာဝဘေးလျှော့ချရေးစီမံချက် လပွတ္တာနှင့်ကွမ်းခြံကုန်းတွင် စတင်... စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်း... ရန်ကုန်မြို့မှ ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာအဆောက်အအုံများ ထိန်းသိမ်းရေး မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာ... သစ်လုံးပုံများ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဒေါ်လာငါးသန်းဖိုးခန့် ဆုံးရှုံး... ကာကွယ်ဆေးဖြင့် ၀က်သက်ကို ရာနှုန်းပြည့် မကာကွယ်နိုင်... ၂၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည့် ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုအတွက် အမှုဖွင့် အရေးယူထား... ဘုရင့်နောင် တွင် ကတ္တားတစ်စင်း ဆောက်မည်... အလုပ်လုပ်နေကြရသည့် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးများ စာသင်ခွင့် ရရှိရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရန်လို... အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ တွင် နိုင်ငံခြားသားများ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နိုင်... ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ချန်နယ်လ် ရုပ်သံလိုင်း တစ်ခုထုတ်လွှင့်ရန် စီစဉ်နေ... ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများအား ဂျပန်အစိုးရထောက်ပံ့... မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သုတစုံလင် ဗုဒ္ဓ၀င် ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... ဂျွန်ဟော့ကင်း စင်ကာပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံ ကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်... သံချပ်တွေခံစားနိုင်မယ့် 'တစ်ခါက မဟာရန်ကုန် သင်္ကြန်ညများ'... ဥပဒေနှင့် မှုခင်းသတင်း- ဥပဒေနှစ်ရပ်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အနှစ်သာရ ကွာခြားပုံ... မြို့တွင်းမြို့နယ်များရှိ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအ၀ယ်များ သိသာစွာ လှုပ်ရှားလာဟု ၀ါရင့်အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်များပြော... အရန်ဆန်ဖြည့်တင်းရန် တန်သိန်း ၅၀ စတင်ဝယ် ... အိုင်အမ်အက်ဖ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများ ၀င်ရောက်လာ မည့်အပေါ် ပညာရှင်များ သုံးသပ်... ဗဟိုဘဏ်နှင့် တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းတို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်... ကွမ်စီကုန်စည် ပြပွဲ ကျင်းပမည်... ပြည်သူကပေးလိုက်သည့် အာဏာနှင့် တာဝန် များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်သွားမည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ကတိပေး...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 22 March 2012- Vol. 29, No.562"မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၂ ၊ ၂၂-၃-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: မဲဆန္ဒနယ် ၄၀ ၀န်းကျင်လောက် နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်... လွတ်လပ်မျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် 'ကန်' ကိုယ်စား လှယ်ပြောကြား... ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ... ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း ၂၄ ရက်နေ့ အပြီး ပြုစုမည်... မိတ္ထီလာ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း အမှု ခရိုင် တရားရုံးက ပလပ်... နေပြည်တော် တွင် မဲပေးနိုင်သူဦးရေ ၂၀၁၀ ခုနစ် ကထက် လျော့နည်းသွား... အင်န်အယ်လ်ဒီ အတွက် အနုပညာရှင်များ၏ မဲဆွယ်ရေး ခရီးစဉ် မတ် ၂၆ ရက်နေ့ စမည်... ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ လိုအပ်နေဆဲ... ကချင်ပြည်နယ် အတွက် 'ကန်'က ဒေါ်လာ တစ်သန်းခွဲ လှူဒါန်းမည်... ကြော်ငြာကောင်းပြီး ပစ္စည်းမကောင်းရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ပြည်သူတွေက နားလည်ကြပါတယ်... နိုင်ငံတကာမှ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအား ဖိတ်ကြားလိုက်ပြီ... မြစ်ဆုံရွာများမှ ပြောင်းရွှေ့ခံရသည့်ဒေသခံများ အသက်မွေး လုပ်ငန်းများ အခက်တွေ့နေ... ဒဲရစ်မစ်ချဲလ် က မြန်မာ လွှတ်တော်တွေကို ချီးကျူး... အဓမ္မစေခိုင်းမှု ပပျောက်ရေးကို ရပ်/ကျေး ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရန် အဆိုတင်... မြန်မာ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ လွှတ်တော်သမဂ္ဂ ၀င်ရန် ဆုံးဖြတ်... ရှပ်ပြေးရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှု ၁၁ ဦး သေဆုံး၊ ၁၃ ဦး ပျောက်ဆုံး... မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော် မရှင်ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့မှ ပယ်ဖျက်... မဇ္ဈိမ အပတ်စဉ် ဂျာနယ်အား မေလဆန်း စတင်ထုတ်ဝေနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထား... အလုပ်သမားရေးရာ ဆန္ဒပြမှုများ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေး စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေနှင့် မသက်ဆိုင်... အမရာဟိုတယ်မှ မြတ်ဆုမွန် ဂေဟာသို့ လှူဒါန်း... ရခိုင်ကမ်းလွန် အေ-၆ ၌ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ခိုအောင်းမှု ထပ်မံတွေ့ရှိ... အမေရိကန်စင်တာတွင်... သင်တန်းကြေး တိုးမြှင့် လိုက်၍ ကျောင်းသားများအခက်တွေ့... ချေးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် စက်မှု စီမံကိန်းများအား ဆိုင်းငံ့... မီဒီယာဥပဒေသစ် ယခုနှစ်ကုန် တွင်ပေါ်ထွက် လာရန် ရည်မှန်း... မြန်မာမီဒီယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာညီလာခံမှ ပိုမိုပွင့်လင်း တိုးတက်သော မြန်မာမီဒီယာ ကဏ္ဍဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ဦးတည်... ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းမဟုတ်... အိန္ဒိယ-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ကားမောင်း ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အတွက် ဆွေးနွေး... ကျောက်ကပ် အစားထိုးခွဲစိတ်မှုများကို တစ်လတစ်ကြိမ် ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ပေးနေ... သတ္တမအကြိမ်မြောက် သုတစွယ်စုံ စာပေဆုတွင် ဆုအမျိုးအစား ခုနစ်မျိုး ချီးမြှင့်... ပုဂံညဈေးတန်းကို ထပ်မံ တိုးချဲ့ခြင်းမပြုဘဲ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန် ညှိနှိုင်း... တာမွေဈေးပြောင်းရွှေ့မှုအား ဆိုင်ရှင် အများစု၏ ဆန္ဒအရ ဆုံးဖြတ်မည်ဟုဆို... ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် သုံးရက်ကြာ ရေပြတ်လပ်ခဲ့... လူကူးမျဉ်းကြားမှ မကူးသူ ၇၀၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ... ပြည်တွင်းထုတ် ဆေးဝါးဝယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးခွင့် မျှတစေလို... တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်စုကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း... 'ကန်'ဒေါ်လာ သုံးသိန်းကျော် ဂျပန် ပံ့ပိုး...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) Vol. 29 No. 561, 15 March 2012- "မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၆၁ ၊ ၁၅-၃-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား အနီးကပ် စောင့်ကြည့်မည်... ယုံကြည်ချက် အကျဉ်းသား များအား ကူညီရန် ဦးဝင်းတင် ဖောင်ဒေးရှင်း ထူထောင်... ဥပဒေနှင့်အညီ အခြေခံ အလုပ်သမား အဖွဲ့ အစည်းများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ကူညီပေးမည်... တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ အခြေခံ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ တည်ထောင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေ... နော်ဝေနှင့် ဆီဒါ ပညာသင်ဆုများအတွက် လျှောက်လွှာများ စတင်လက်ခံနေ... ဘုန်းတော်ကြီး သင်ကျောင်းများ အတွက် ဂျပန် အစိုးရက 'ကန်'ဒေါ်လာ ခုနစ်သိန်းကျော် ထောက်ပံ့... မသန်စွမ်း လူငယ်များအတွက် ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်း ဖွင့်လှစ်... ဒိုဟာသို့ လေကြောင်း ပြန်စမည်... မြန်မာကို မိတ်ဖက် နိုင်ငံအဖြစ် တိုးမြှင့် ဆက်ဆံသွားရန် အမေရိကန်ဆုံးဖြတ်... တစည ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပလပ်ခံရမှု လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တင်ပြမည်... ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံတကာကို လေ့လာခွင့်ပြုကာ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိကြောင်း ပြသရန်လိုအပ်... ရွှေ့ပြောင်းပေးမည့် တာမွေဈေးနေရာသစ်သို့ ဈေးသူဈေးသား အများစု မရွှေ့ပြောင်း လို... နွားထိုးကြီးမြို့နယ် တွင် ပထမဦးဆုံး မွေးမြူရေးဇုန် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေ... ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ် တွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ပိုမိုထည့်ဝင်ပေးရန် လိုအပ်လာ... ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို ဘီဘီစီအသံလွှင့် ဌာန၏နေရာသစ်မှ ပထမဆုံး ထုတ်လွှင့်... အုတ်ဖို-ဥတို ကျေးလက်လမ်းမ ဖောက်လုပ်... လာနီညာကြောင့် ယခုနွေ အပူလျော့နိုင်... 'သီးလေးသီး' ပွဲပိတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်ဖြေရှင်း... ငှက်ရိုင်းများမှ ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရပြီးနောက် ဆက်လက်စောင့် ကြည့်နေ... ရန်ကုန်တွင် တစ်မနက်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု နှစ်ခုဖြစ်ပွားပြီး တစ်ဦးသေဆုံး... ကမ္ဘာအေးတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား... ပေါ့ဆမီးကြောင့် ထီးလင်းမြို့နယ်တွင် နှစ်ဦးသေဆုံး... တရားမ၀င် ကျွဲ ၂၁ ကောင် သယ်ဆောင် သူများအား တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်... တရား စီရင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပုံ အဆင့်ဆင့် အကြောင်း သိကောင်းစရာ... ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက်များ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားရေး စာချုပ်များ ချုပ်ဆို... နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးဘီလျံထက်မနည်း စီးဝင်လာရန်ရှိ... ကိုရီးယားထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လာရောက် ဆွေးနွေးမည်...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 8 March 2012- "မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၆၀ ၊ ၈-၃-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Date of publication: 08 March 2012
Description/subject: ပြည်သူများက မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယုံကြည်... လှိုင်သာယာရှိ တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများ ရပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ၀ါဏိဇ္ဇခုံရုံးက ဆုံးဖြတ်ပေး... တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အချို့နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံ... ဒီမိုကရေစီ ဘက်မှ ရပ်တည် ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံ... ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ ရှမ်းပြည်နယ် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွင် သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက် လိုက်ပါခဲ့... ဒီမိုကရေစီအင်အားစု ပါတီငယ်များ အကျပ်အတည်း တွေ့နေ ကြရတဲ့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲ... ကေအိုင် အို၊ ကေအိုင်အေ တို့နှင့် သုံးရက် ကြာ ရွှေလီတွင် ဆွေးနွေးမည်... ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကြား ဆက်ဆံရေး အဖုအထစ်မရှိဟု ကိုမင်းကိုနိုင် က ပြောကြား... ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအမှန်ကို ထုတ်ဖော်ပြနိုင်ပါက ပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းရန်သေချာ ဟု ဥရောပပါလီမန်အမတ်များကဆို... ကမ္ဘောဒီးယား ရှိ မြန်မာ့ လက်ရာ ရှေးဟောင်း ဘုရားတစ်ဆူအား ပြန်လည်ပြုပြင် စိန်ဖူးတော်တင်... ကုလားတန်မြစ်ကြောင်း ဘက်စုံသုံး စီမံကိန်း အတွက် လေ့လာမှုများ ထပ်မံပြုလုပ်မည်... လေယာဉ်ဆီကို မူလဈေးဖြင့် ပြန်လည်ရောင်း ချပေးမည် ဟုဆို... ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန် အမဲသား ၁၈ တန် ပိုင်ရှင်နှင့် သယ်ဆောင် သူများအား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်... ကလေးသူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ဥပဒေအရ ကာကွယ် ပေးရန် ဆောင်ရွက်မည်... သက်ကြီး ဆရာဝန် များ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး စင်တာကို ၀င်ကြေး အခမဲ့ဖြင့် တာမွေမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထား... ကကတစ်နှင့် တီလားဗီးယား ငါးမွေးမြူမှု ယခုနှစ်တွင် တိုးချဲ့မည်... မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေအနေများကို Action Aid အား ငွေကြေး ပံ့ပိုးနေသူ အဲလက်စ်ဂရေဟမ် က ဆွေးနွေးခဲ့... ပြည်သူ့ဥယျာဉ် တွင် ချစ်သူစုံတွဲများ အတွက် လမ်းဖွင့်မည်... ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အခက်အခဲများ...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 1 March 2012- "မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၅၉ ၊၁-၃-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ခရီး..."ပိတ်ဆို့မှုကို ဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြစ်ကြီးက စီးသွားပါပြီ"... စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုသည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ အမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်ဟု ၈၈ ကျောင်းသားများပြော... မြန်မာအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီ မဲဆန္ဒနယ် သုံးခုတွင် ယှဉ်ပြိုင်မည်... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကိုယ်စား လှယ်လောင်း အဖြစ် အတည်ပြု... မိတ္ထီလာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တစ်သီး ပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်ကို တရားစွဲ ဆို... ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နေပြည်တော် လေးမြို့နယ်တွင် ဟောပြောမည်... ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ပြပွဲ မတ်လအတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပမည်... လိုင်းဆွဲလျှင် ပြည် တွင်းရွှေဈေး ထပ်မံမြင့်တက် နိုင်ဟုဆို... အင်တာဗျူး : "ခြစားမှုကို အရေးယူဖို့ လုပ်နိုင်အောင်တော့ လုံလောက်တဲ့လစာကို အရင်ပေးဖို့လို"... စပါးဈေးများအား တရားဝင် သတ်မှတ် ထားသော နှုန်းထားနှင့် အခြင်အတွယ် အတိုင်း ရောင်းချလို... အနောက်နိုင်ငံများက ပြန်ချဉ်းကပ်လာသော်လည်း တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်ခံမည်မဟုတ်... ထုတ်/တင် စာနယ်ဇင်း အချို့တွင် မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မကိုက်ညီသော ပုံများ ထည့်သွင်း ဖော်ပြလာမှုများအတွက် စာပေ စိစစ်ရေးဌာနက သတိပေး... ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် အထွေထွေ စာမူများအား ထုတ်/တင်စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြု... အာဆီယံ ထိပ်သီး ညီလာခံ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကို အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကျေနပ်မှုရှိ... အစိုးရဆေးရုံများ အတွက် ဆော်ဒီမှ 'ကန်'ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ချေးငှားမည်... ဂျီအက်စ် အမ်ဖုန်းများ ချထားပေးမည့် ရက်နှင့်ဈေးနှုန်း မသေချာသေး ဟု သိရ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ထိုင်းစီးပွားရေးအဖွဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေး... မြန်မာအမျိုး သမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် လိုအပ်... ပုဂံဒေသ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ငါးနှစ် အတွင်းဆောင်ရွက်မည်... သံတွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဲကမ္ဘောဇလေယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်မှုအတွက် အာမခံပေးရန် စီစဉ်နေ... ဂျပန် ကုန်စည်ပြပွဲ JAPAN FESTIVAL ၂၀၁၂ ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပမည်... မျက်မမြင်များ အတွက် ဂျပန်အကြောပြင် သင်တန်း ပို့ချမည်... တောင်ရိုး တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုပွဲတော် တတိယအကြိမ်မြောက် ကျင်းပ... စစ်တွေကမ်းခြေတွင် ပလတ်စတစ် ကင်းစင်ရေး လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်ပြုလုပ်မည်...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 23 February 2012- "မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၅၈ ၊၂၃-၂-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်
Description/subject: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တွေ့ဆုံ... ရွှေတိဂုံ နှစ် ၂,၆၀၀ ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် စတင်... ထိုင်းနှင့် မြန်မာ မီဒီယာ လုပ်ငန်းကြီး များပူးပေါင်း ... အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်ဟောင်းများ အွန်လိုင်းမှ အဖွဲ့ပြန်ဝင်နိုင်... ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပွဲတော်ကြီးတွင် 'သီးလေးသီး' အငြိမ့်အဖွဲ့ ပွဲခွင် ဖျက်သိမ်းရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂေါပကအဖွဲ့ဖြေရှင်း ... ကချင်ဒုက္ခသည်များ ရှေ့နှစ်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ အခက် အခဲရှိနိုင်... မြေအောက် ရထားလမ်းစနစ် တည်ဆောက် ရန် ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ စိတ်ဝင်စား... တောင်သူလယ်သမားများ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော အချက် ခုနစ်ချက်အားလယ်ယာမြေဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး တင်ပြထား ... အာဆီယံမှ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာသူများကို လက်ခံသွားရန် စဉ်းစားမည်... လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး မှုမရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုးတက်မှု ရနိုင်မည်မဟုတ်... ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ အနိမ့်ဆုံးအခြေခံ လစာ ကျပ်တစ်သိန်း ဝန်းကျင် ဖြစ်သင့်... ကျပ်နှစ်သိန်းတန်ဖိုးဖြင့် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများ မတ်လ နောက်ဆုံးပတ် စတင်ချပေးမည်ဟုဆို... မင်္ဂလာ ဒုံ ရွှေနံ့သာ စံပြကျေးရွာမှ လယ်သမား များက လယ်ယာမြေ ကိုသာ ပြန်လည်ရယူလို... အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖို့လိုအပ်... ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သတ္တိရှိရှိ ပြောဆိုကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်း... မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများအသင်းကို နိုင်ငံတော်အဆင့် ဖွဲ့စည်းဆောင် ရွက်ရန်စီ စဉ်နေ... ၂၀၁၄ အာဆီယံ ထိပ်သီး ညီလာခံ အတွက် လေ့လာရေး အဖွဲ့ စေလွှတ်မည်... ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီ အတွက် မြန်မာ့နိုင် ငံရေး ပြောင်းလဲမှုက အဓိကကျဟု ပညာရှင်များသုံးသပ်... ဆင်းရဲနွမ်းပါး မှုလျှော့ချရေး တွင် ချင်းပြည်နယ်ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်း... ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများ မှဒေသ ခံများ နေ ရပ်ပြန်နိုင်ရန် စတင်စီစဉ်နေ... တောင်သူလယ်သမားများဘ၀ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ကြိုးပမ်းနေ... ရန်ကုန်တွင် အများသုံး အိမ်သာ လေးလုံး တည်ဆောက်နေ... ကမ္ဘာ့ မိုးလေ၀သနေ့အထိမ်း အမှတ် ပြပွဲနှင့် သုတေသန စာတမ်း ဖတ်ပွဲ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပမည်... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကာကွယ်ရေးကို ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ပြ... Yangon Film School မှ သင်တန်းသားများဖိတ်ခေါ်နေ... ယခင် ဂျီအက်စ် အမ် မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် အော်တို လိုင်းဖုန်းများ ကြိုတင်ငွေဖြည့် စနစ်သို့ မတ်လတွင် စတင်ပြောင်းလဲမည်... ရန်ကုန်မြို့တွင် နှစ်ရက်အတွင်း မီးလောင်မှု လေးကြိမ်ဖြစ်... ဘဏ်ဥပဒေများပြင်ဆင်ရာ၌ ပြင်ဆင်ရန်သင့် မသင့် စဉ်းစားသင့်သော ဥပဒေပုဒ်မ ၅၂...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese)16 February 2012,Vol.28No.557/ မြန်မာတိုင်းမ်- ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၆ -၂၀၁၂ တွင်လွှင့်တင်သည်- အတွဲ ၂၈ အမှတ် ၅၅၇
Description/subject: နိုင်ငံရေးလုပ်ရန် ပြန်လာခြင်းမဟုတ်ဟု ABSDFခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးအောင်နိုင်ဦး ပြောကြား... အစိုးရ၊ အင်န်အယ်လ်ဒီတို့နှင့် လက်တွဲမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဌေးမောင် ပြောကြား...ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ် ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး ရုံးခန်း ကို ဗိုလ်ချုပ် မွေးနေ့တွင် ဖွင့်လှစ်... လုပ်အကိုင်ရရှိရေး အဓိကလုပ်ရန်လိုနေဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော... ယူနက်စကို၏ ဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံ ပေးအပ်... ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် များသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ခေါက်စီ သွားရောက်မည်... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ဆန်းဦး အမွေဆိုင်အမှုကို ဆက်လက်ကြားနာ... ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေး တကယ်လုပ်မည်ဟု သူရဦးရွှေမန်းပြောကြား... မြန်မာအတွက် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုမူဝါဒ... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ဘတ်ဂျက် ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဆွေးနွေးရန်ရှိ... စက်မှုစီမံကိန်းများ၌ ယခင်အမှားမျိုး ထပ်မမှားသင့်၊ ငွေပုံမအောသင့်... ဆက်ကြောင်းချို့ယွင်း၍ အင်တာနက်လိုင်း နှေးကွေးမှုဖြစ်...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 8 February 2012, Vol.28 No.556/ မြန်မာတိုင်းမ်- ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈-၂၀၁၂ တွင်လွှင့်တင်သည်- အတွဲ ၂၈ - အမှတ် ၅၅၆
Description/subject: အင်န်အယ်လ်ဒီကို ပေးသောမဲများ ပယ်မဲမဖြစ် သွားစေရေး သတိထားကြ ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တိုက်တွန်း... ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ စေမည်ဟု သူရဦးရွှေမန်းက ကွင်တားနားကို ကတိပေး... အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီရန်ပုံငွေပွဲ အလှုငွေ သိန်း ၂၀၀ ကျော် ရရှိ... နိုင်ငံတကာကို ပေးဆပ်ရန်ရှိသည့် မြန်မာ့ အကြွေး ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံရှိနေ... မှတ်ပုံတင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းများ စီမံချက်ဖြင့် ထပ်မံထုတ်ပေးမည်... ပြည်သူများ နိုင်ငံရေးအသိအမြင်၊ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝစေရန် ၀က်ဘ်ဆိုက်သစ်လွှင့်တင်... တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း မီးလောင်မှု အကြိမ် ၉၃၀ ခန့် ဖြစ်ပွားပြီး ၆၁ ဦး သေဆုံးကာ ၁၅၇ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့... အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုအချို့ လျှော့ပေးလိုက်ပြီ... ၀န်ထမ်းလစာ၊ စရိတ်နှင့် ချီးမြှင့်ငွေများ အလျင်အမြန် တိုးပေးရန် လိုအပ်... ၂၀၁၂-၁၃ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ကျပ် ၆၈၅ ဘီလျံ တိုးမြှင့်လျာထား... လှိုင်သာယာ မီးလောင်မှု အိမ်ခြေ အလုံး ၃၀၀ ကျော် လောင်ကျွမ်း... ယခင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား များအား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့၏... စာရင်းပါ အတိုင်း နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်များ ထုတ်ပေးမည်... ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်း... အင်န်အယ်လ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းသည် လွှတ်တော်အတွင်း အပြင် နိုင်ငံရေးတွင် လွှမ်းခြုံ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထား... သင်္ဘောအရာရှိအချို့ လက်မှတ်အတုများဖြင့် လုပ်ကိုင်နေ... ဗုဒ္ဓသာသနာတွင် အဓမ္မ၀ါဒတချို့ မသိမသာ ခေါင်းပြူလာ၍ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ဟုဆို... စွမ်းအင် ထိရောက်စွာ သုံးစွဲရေးနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... ပေါင်းဆန်တင်ပို့မှု တိုးသော် လည်း ဈေးနှုန်း ကျဆင်းနေ... သက်တမ်းလတ်တိုက်များ ကြံ့ခိုင်မှုအထူး ဂရုပြုသင့်နေ ပြီဖြစ်ကြောင်း ၀ါရင့်တည်ဆောက် သူများ သုံးသပ်... သတ်မှတ်အလေး ချိန်အောက်ကဏန်းများ တင်ပို့ခြင်းကြောင့် မွေးမြူရေး သမားများ အတွက်လည်း ကုန်ကြမ်းရှားပါးမှု ဖြစ်လာနိုင်... ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းမှု လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ငါးသလောက် မျိုးတုန်းလုဖြစ်နေ... ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ဖြေလျော့မှုကြောင့် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ လျာထားချက် ကျော်လွန်နိုင်... စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အင်အားကြီး စီးပွားရေးအဖွဲ့ လာရောက်ပြီး မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည်... စီဒီအမ်အေ ၈၀၀ ဖုန်း ၀၉-၉၁၀ များ ပြန်လည်ချထား ပေးသော်လည်း လျှောက်ထားသူ နည်းပါးနေသေး... ပျိုးပင်အရောင်းဆိုင်များတွင် 'အာဆီယံသပြေ' ဈေးကွက် ရရှိပြီး အရောင်းအ၀ယ် တွင်ကျယ်လာ... ကွမ်းတံတွေးတားမြစ်ချက်ကို အထူးကြပ်မတ်မှ အောင်မြင်နိုင်... အင်္ဂလိပ်စာဘွဲ့ရ ကျောင်းသားများ ပထမအကြိမ် အာစရိယပွဲ ကျင်းပမည်...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 02 February 2012- "မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၅၅ ၊ ၂-၂-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်။
Date of publication: 02 February 2012
Description/subject: ပခုက္ကူခရိုင်တွင် ဒေသခံများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကွင်းဆင်းမေးမြန်း... ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိက ပါဝင်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု စတင်ခွင့်ပြုမည်... "ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ အကျိုးရှိစွာခွဲဝေသုံးစွဲဖို့ ဘက်စုံက တွက်ဆ ပါ"... မြန်မာ က နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများ အား အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရှစ်နှစ် ပေးမည်...ဈေးကွက်နှင့် လျော်ညီသည့်ငွေလဲနှုန်း စနစ်သို့ ပြောင်းလဲမှု လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ် စတင်မည်... မြန်မာ့စီးပွားရေးခေတ်မီတိုးတက်မှု အတွက် စင်ကာပူမှ ကူညီမည်... ဆန်တန်ချိန် နှစ်သိန်းကို အင်ဒိုနီးရှားသို့ ယခုလတွင် စတင် တင်ပို့သွားမည်... သစ်လုပ်ငန်းရှင်များက အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကို နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ၀င်မလာမီ အပြီးရေးဆွဲ မည်... ရန်ကုန်မြို့၏ လေထုထဲတွင် အမှုန်ထုပမာဏ သတ်မှတ်စံနှုန်းထက် ပိုမိုများပြားနေ... ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးသောမြို့ပြများ ရေမူဝါဒချမှတ်ရန် လိုအပ်နေ... ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်က ငါးမန်းတောင်ဟင်းချိုကို မီနူးမှထုတ်ပယ်... ရေတိမ်ဒေသတွေကို မပျက်စီးအောင် အချိန်မီထိန်းသိမ်းဖို့ သတိပေးနေ မယ့်နေ့ ... ငါးလုပ်ငန်း များ ရေရှည် တည်တံ့ရေး အတွက် ကြေးတိုင် စနစ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လို... နော်ဝေဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ တယ်လီနော က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားနေ... ဈေးကြီးများ၊ ကုန်တိုက်ကြီး များရှိ တရားမ၀င် ကုန်စည်များ သုံးလအတွင်း အခွန်ဆောင်စေ ချင်... ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုံနှိပ်မီဒီယာဥပဒေကြမ်း ကို ရှေ့နေချုပ်ရုံး သို့ တင်ပြထား... ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာ ဘွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရရှိ... မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အတွက် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ... ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်အခြေစိုက်ရန် ပြည်ပ အခြေစိုက် မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ပြင်ဆင်နေ... "ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှုများရရှိရေးမှာ အရေးကြီးဆုံးကိစ္စ"... အစိုးရနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တိုးတက်ရေးပါတီတို့ ပဏာမငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှုရရှိ... ယခုလအတွင်း ကေအိုင်အိုနှင့် ဆက်ဆွေးနွေးမည်... ပြည်ထောင်စုကြီးကနေ မည်သည့်အခါမှ ခွဲမထွက်ဟု တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ကတိပြု... ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်းအတွင်း တရားမ၀င် သိုလှောင် ရောင်းချမှုများ ရှိနေ သည့် လောင်စာဆီ များကို ဖော်ထုတ် အရေးယူတော့မည်... မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု ၉,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့၊ သေဆုံးသူ ၂၇,၀၀ ကျော် ရှိ... တောင်ဥက္ကလာဂေါက် ကွင်းမြေကို ၀ယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပြီး ငွေကြိုယူသူကို အမှုဖွင့်... ဒေါင်းတို့ခရီး... ဩစတြေးလျ ပညာသင်ဆု အတွက် ရွေးချယ်ခံရ သည့် မြန်မာ ကျောင်းသားများ၏ အရည်အချင်း မြင့်မားကြောင်း သတ်မှတ်ခံရ ... ကန်တော်ကြီးတာဝါစီမံကိန်းကို ရှန်ဂရီလာ ကုမ္ပဏီပြန်လည်စတင်... လူအများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသိ တိုးစေဖို့ မီးမောင်းထိုးပြသခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲ... 'မြတ်ဆုမွန်' သီချင်းကိုဖျက်ဆီးပြီး မသီဆိုဖို့ မန္တလေး သိန်းဇော် မေတ္တာရပ်ခံပြီးနောက် လူရွှင်တော် ဖိုက်စတားအဖွဲ့မှ တောင်းပန်... ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပွဲတော်ကနေ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရရှိခဲ့... အကယ်ဒမီဗေဒင် အထူးဟောပြောချက်... အရင်နှစ်တွေထက် ခံစားခွင့်တွေပိုရမယ့် Miss Tourism ပြိုင်ပွဲ... အကယ်ဒမီကို လူတွေ ရင်မခုန်ကြတော့ဘူးလား ...အကယ်ဒမီပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြမယ့် ဗန်းကိုင်မယ်များ...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 26 January 2012, Vol.28 No.554/ မြန်မာတိုင်းမ်- ဇန္န၀ါရီ ၂၆ - ၂၀၁၂ တွင်လွှင့်တင်သည်-အတွဲ ၂၈ - အမှတ် ၅၅၄
Description/subject: နိုင်ငံတကာမှ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူများ အား လက်ခံရန် ဂျွန်မက်ကိန်းတိုက်တွန်း... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် ဘနာဇီယာဘူတို၏ အထိမ်းအမှတ်ဆုဖြစ်သော Shaheed Benazir Bhutto Award for Democracy ဆုအား လက်ခံရယူ... ဥရောပသမဂ္ဂက ကန့်သတ်မှုများ ဆက်လက်၍ ဖြေလျှော့ရုပ်သိမ်းရန် စဉ်းစားနေ... ကေအိုင်အို တို့ တောင်း ဆိုချက်မှ စကားလုံးတချို့ ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်နိုင်လျှင် ငြိမ်းချမ်း မည်... ပြုပြင်ပြောင်း လဲသူများဘက်မှ ၈၈ မျိုးဆက် လွန်ဝင်ဆွဲမည်... ဥပဒေထွက်လာပါက လယ်ယာမြေပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်... တရားမ၀င် သစ်ခိုးထုတ်မှု များ လျော့နည်းစေရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးပါရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတအား မေတ္တာရပ်ခံထား... ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်အ၀င် စံချိန်သစ်ထပ်မံတင်... ၀ယ်လိုအားကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း သုံးမျိုးစလုံး ထပ်မံ တန်ဖိုးမြင့်တက်လာ... အရန်ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်းကို စတင်ဝယ်ယူနေ... အကောက်ခွန်မဲ့ကုန်စည်များကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များထိခိုက် ... ၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလမ်းညွှန် ထွက်ပြီ... ပို့ကုန်တိုးချဲ့ ရန် ဈေးကွက်ရှာထွက်မည်... သုတေသနပြုချက်အရ ဂျပန် ထမင်းလိပ်များ တွင် အီးကိုလိုင်ပိုး ပေါက်ဖွားမှုများနေသည်ကို တွေ့ရ... ကိုဇေယျာသော်နှင့် မစန္ဒာမင်း မဲဆန္ဒရှင် များနှင့် တွေ့ဆုံ... ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးတစ်ဦးအား အမှုဖွင့်... တီလားဗီးယား မွေးမြူစားသုံးခြင်း ဂရုပြုသင့်... ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံဆွေးနွေးပွဲ တိကျသည့်အဖြေနှင့်ဝေးဆဲ... ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာမှ ဆိုင်ခန်းရှစ်ခန်း ပြန်ဖျက်သိမ်း... နိုင်ငံခြားတင်ပို့မှု ကျဆင်းသောကြောင့် မန္တလေးမြို့၌ ငါးဈေးကွက်ပျက်... ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ၁၁၄ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်နေ့... ဆင်းကတ်တစ်ကတ် ငါးထောင်ဖြစ်ရင်ကွယ်... အိန္ဒိယ-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး လက်တွေ့ သရုပ်ပြရေးဆွဲ... ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ Side Effect ရဲ့ ရန်ပုံငွေများ 'ကန်' ပိတ်ဆို့မှုစနစ် သက်ရောက်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရ... ဆေးစက်ရေး ချက်ကားတွေနဲ့ ပန်းချီငွေဖြိုး တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ ကျင်းပမည်... မစ္စမြန်မာ ၂၀၁၂ အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်များ ဖိတ်ခေါ်နေ... အဆိုတော် ယုန်လေးရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ... အသင်းသားများ၏ ခြေစွမ်းပြမှု ဒဲလ်ဂလစ်ရ်ှလိုနေ... ဂျွိုင်နာ-ကာဆီ အမေရိကန် ပြေးခုန်ပစ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ် ဖြစ်လာ... မိုက်ကယ် ဖဲ့လ် ရွှေတံဆိပ်ရပြန်... တတိယအကြိမ်မြောက် Japan Cup တံခွန်စိုက် ကရာတေးဒို ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 19 January 2012, Vol.28 No.553/ မြန်မာတိုင်းမ်- ဇန္န၀ါရီ ၁၉ - ၂၀၁၂ တွင်လွှင့်တင်သည်- အတွဲ ၂၈ - အမှတ် ၅၅၃
Description/subject: ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးဆုတံဆိပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ချီးမြှင့်... "ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို ဇွတ်အတင်းဖန်တီးလို့မရဘူး"... အမှန် တကယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေပြီဟုယုံကြည်ကြောင်း 'ကန်' အမတ်ပြော... မြန်မာနှင့် စီးပွားရေး မလုပ်ရန် နော်ဝေကုမ္ပဏီများကို အကြံပြု ထားခြင်းကို နော်ဝေအစိုးရ ပြန်ရုပ်သိမ်း... မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ယူနက်စကိုစီမံချက်အတွက်... ယူရို လေးသိန်း ထောက်ပံ့... အင်န်အယ်လ်ဒီ ထံမှ ရရှိသည့်စာရင်းကို စိစစ်ကာ ၃၀၂ ဦးကို လွှတ်ပေးခဲ့ဟုဆို... "တန်ဖိုးရှိတဲ့ သတင်းတွေ ဆိုရင် ပြည်သူက ထမင်းတစ်နပ် မစားရလည်း ၀ယ်ဖတ်မယ်"... နောက် တစ်ဖန် အာဏာ သိမ်းမှု ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဟု သူရ ဦးရွှေမန်း ပြောကြား... တာလီဘန်နှင့် ဆက်သွယ်သူ ၁၃ ဦးအား ဖမ်းဆီးထား ... ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံ များ ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း မရှိ က ပြန် လာနိုင်... တောင်ကိုရီးယား ရေနံတင်သင်္ဘောပေါက်ကွဲမှု မြန်မာနှစ်ဦး သေဆုံးကြောင်း အတည်ပြု... အင်န်အယ်ဒီက နေပြည်တော်တွင် အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း... အလုံမြို့နယ်ရှိ သိပ္ပံဈေးပြန်လည် တည်ဆောက် ရန် ဈေးသူ၊ ဈေးသားများ ဆန္ဒမဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်... မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ လုံး တွင် ပြန်လည် အအေးလျော့လာမည်... တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့ ပြည်တွင်း အင်အားရော ပြည်ပအင်အားပါ လိုအပ်ပါတယ်... ကေအိုင်အိုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ရွှေလီသို့ သွားကြပြီ... ပထမဆုံးအကြိမ် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲကျင်းပ... ပြင်သစ်၏ အကူအညီ သုံးဆတိုးမည်ဖြစ်ပြီး ပိတ်ဆို့မှု များကို အဆင့်ဆင့်ရုပ်သိမ်းရန်ရှိဟု ပြင်သစ်ဝန်ကြီးဆို... စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် တို့ အတွက် အလှူရှင်များ လိုအပ်ဆဲ... တိုင်းပြည်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ပုံဖော်ခဲ့ တဲ့နေ့ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်... ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ တချို့၏အသံများ... ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အတွက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကိစ္စကို ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် စဉ်းစားမည်ဟုဆို... အောင်ဘာလေထီဆု ကျပ်သိန်း ၁,၅၀၀ သို့ တိုးမြှင့်လိုက်သဖြင့် ထီဈေးကွက်ကောင်း လာမည် ဟု မျှော်မှန်း... မြန်မာ လုပ်သားများထံမှ ငွေလွှဲစနစ် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်း စတင်နိုင်မည်... အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလယ်ယာစနစ် စစ်တမ်းအား လွှတ်တော် မခေါ်မီ အပြီးဆောင်ရွက်မည်... အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အုပ်စု လာမည်... ရခိုင်မှထွက်သည့်သယံဇာတဓာတ်ငွေ့ကို ရခိုင်သို့ခွဲဝေပေးရန် စီမံချက်ရှိ... မြန်မာ့ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အထူး မျှော်လင့်နေ... ဖားကန့်မှော် ပိတ်သိမ်းပေမယ့် ဈေးကွက်မထိခိုက်... ဧရာဝတီလင်းပိုင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကင်းလှည့်ခရီးစဉ်စတင်... ဆီနှင့်ဆီထွက် သီးနှံဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ... တရုတ်ကြက်သွန်ဖြူ၊ အရည် အသွေး ကောင်း ၍ ပိုမိုသုံးစွဲလာလျက်ရှိ... မန္တလေး၌ တီဘီလူနာ ၄,၀၀၀ ပိုရှာရန် အစီအစဉ်စတင်... HIV- AIDS ဝေဒနာ ခံစားနေရသော ကလေးများ အတွက် ပရဟိတ ဂေဟာဖွင့်လှစ်ရန် နေရာပြောင်း... ကိုလူချောတို့ အဖွဲ့အတွက် ရန်ပုံငွေဗီဒီယိုရိုက်မည်... ချန်ချန်ရဲ့ ဈေးရောင်း ပွဲတော်... ရှေးလက်ရာတွေ ခံစားနိုင်မယ့် 'မြန်မာအလှ'ပန်းချီပြပွဲ... အကယ် ဒမီ ပဟေဠိ အဖြေညှိကြမယ်... 'လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ' ပွဲတော်မှ ဆုရကားများ စင်ကာပူတွင်ပြမည်... ရွှေကမ္ဘာလုံးပွဲမှာ အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ "The Artist" ဇာတ်ကား အော်စကာမှာရော အခြေအနေ ကောင်းနိုင် မလား... နှစ်သစ်အစမှာပဲ ပရိသတ် ပေးတဲ့ဆုတွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ ကေတီပယ်ရီ... ကယမ်းတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ကြေးခွေပတ် ဓလေ့ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မလား... သွေးသံရဲရဲနဲ့ အလဲအကွဲထိုးသတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဒဂုံ ရွှေအောင်လံ... အောက်မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ် ကာယဗလ မောင်နှင့် ကာယအလှမယ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ... ၁၁ မိနစ် တစ်ယောက်လျော့၊ ခရစ်ဖွိုင်း လက်ဆောင်၊ ရှုံးကြွေးဆပ် မန်ယူ... လက်ရှိချန်ပီယံ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် တာထွက်ကောင်းခဲ့... ဩစတြေးလျအိုးပင်းတွင် နာဒါးလ် ပါဝင်ဖို့မသေချာ... အေအင်န်စီ ဦးဆောင်သော တောင်အာဖရိက လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲ ဒေသ တစ်ခုလုံးကိုင်လှုပ်ခဲ့... မလေးရှား အတိုက် အခံခေါင်းဆောင် အန်ဝါ အမှုမှ လွတ်ပြီ... အေအင်န်စီ ရာပြည့်နှင့် တောင် အာဖရိကခေါင်းဆောင်များ၏ ဘ၀... လူသန်း ၂၀၀ ခန့် တရားမ၀င်မူးယစ် ဆေးဝါးသုံးစွဲနေ... တောင်ပိုင်းဆူဒန် လူမျိုးစု အကြမ်းဖက် ခံရမှု အကူအညီလိုအပ်နေ... အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ရီပတ် ဘလီကန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရှစ်မဲဖြင့် အနိုင်ရ... 'လ'ပေါ်မှ တွင်းထွက် ဩစတြေးလျ၌တွေ့...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 12 January 2012 "မြန်မာတိုင်း(မ်)"အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၅၂ ၊ ၁၂-၁-၂၀၁၂ တွင် လွှင့်တင်သည်။
Description/subject: ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများကို လွှတ်ပေးရန် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တိုက်တွန်း...ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဗြိတိန်မှ ပေါင် နှစ်သန်းကူညီမည်...Myanmar Times Logo Home ပြည်တွင်းသတင်း အထက်မြန်မာပြည်သတင်း နေပြည်တော်သတင်း စီးပွားရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေ လူမှုဘ၀ရသစုံလင် ကမ္ဘာ့သတင်း အားကစား နည်းပညာ ဓါတ်ပုံ ဆောင်းပါး Now! Fashion Forward Share ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများကို လွှတ်ပေးရန် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ရက်တာလာရောက် ခဲ့သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ၀ီလျံဟေ့ဂ်က ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံ နေသူများအား လွှတ်ပေးရန် အစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း ၎င်း၏ခရီးစဉ် အပြီး မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောခဲ့သည်။ News ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဗြိတိန်မှ ပေါင် နှစ်သန်းကူညီမည် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ပေါင်နှစ်သန်း ကူညီထောက်ပံ့သွားရန် ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကတိပေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာန (DFID)ရုံးအကြီးအကဲ မစ္စတာပေါလ်ဝတ်တင် ဟမ်က ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့က ပြောသည်။... ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲနိုင် လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တစ်နေရာရဖွယ်ရှိ... ဩစတြေးလျက မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ လျှော့ပေးပြီ... (၆၄)နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အခက်အခဲများကြားမှ ကျင်းပနိုင်... ထားဝယ်နှင့် ရန်ကုန်တွင် ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်မည် မဟုတ်တော့ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား... ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတချို့၏ ရှယ်ယာများ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်... ချင်းပြည်နယ်၏ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲအတွက် ကူညီရန် အဖွဲ့အစည်းများ စတင်ပြင်ဆင်... ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူ ညီချက်ရရှိ...Myanmar Times Logo Home ပြည်တွင်းသတင်း အထက်မြန်မာပြည်သတင်း နေပြည်တော်သတင်း စီးပွားရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေ လူမှုဘ၀ရသစုံလင် ကမ္ဘာ့သတင်း အားကစား နည်းပညာ ဓါတ်ပုံ ဆောင်းပါး Now! Fashion Forward Share ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများကို လွှတ်ပေးရန် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ရက်တာလာရောက် ခဲ့သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ၀ီလျံဟေ့ဂ်က ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံ နေသူများအား လွှတ်ပေးရန် အစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း ၎င်း၏ခရီးစဉ် အပြီး မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောခဲ့သည်။ News ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဗြိတိန်မှ ပေါင် နှစ်သန်းကူညီမည် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ပေါင်နှစ်သန်း ကူညီထောက်ပံ့သွားရန် ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကတိပေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာန (DFID)ရုံးအကြီးအကဲ မစ္စတာပေါလ်ဝတ်တင် ဟမ်က ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့က ပြောသည်။ News ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်နေရာရဖွယ်ရှိ ဧပြီလတွင် ပြုလုပ်မည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနိုင်ရခဲ့ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိ အရပ်သား အစိုးရ အဖွဲ့ တွင် နေရာတစ်နေရာပေးအပ်ခံရဖွယ်ရှိသည် ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ News ဩစတြေးလျက မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ လျှော့ပေးပြီ ယခင်က အထီးကျန်ခဲ့သော မြန်မာအစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီသို့ရှေးရှုသည့် ခြေလှမ်းများကို လှမ်းလာခြင်းနှင့် ဒေသတွင်း ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု တိုးလာခြင်းတို့ကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ဩစတြေးလျအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ချမှတ်ထားသော ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများကို လျှော့ပေါ့ပေးတော့မည်ဟု ယခုလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ News (၆၄)နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အခက်အခဲများကြားမှ ကျင်းပနိုင် နယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ကန့်သတ်မှုများစွာရှိနေသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးအခြေအနေများ၊ အခက်အခဲများ ကြားတွင် 'ကချင်ပြည် နယ်နေ့'ကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ကြီးမှူးလျက် ဒေသခံမြို့မိမြို့ဖများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့်အတူ ဇန်န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့၌ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင် ခဲ့သည်။ News ထားဝယ်နှင့် ရန်ကုန်တွင် ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်မည် မဟုတ်တော့ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်မည့် မဂ္ဂါဝပ် ၄,၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတည်ဆောက်မှုကို တည်ဆောက်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးက ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးရုံးတွင် သတင်းထောက်များကိုပြော ကြားသည်။ News ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတချို့၏ ရှယ်ယာများ ဈေးနှုန်းမြင့်တက် ပြည်ပ စတော့အိတ်ချိန်းများတွင် စာရင်းဖွင့်ရောင်းချထားသော မြန်မာ နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ကုမ္ပဏီ တချို့၏ ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း စတော့အိတ်ချိန်း ကိန်း ဂဏန်းများအရ သိရသည်။ News ချင်းပြည်နယ်၏ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲအတွက် ကူညီရန် အဖွဲ့အစည်းများ စတင်ပြင်ဆင် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ရာသီဥတုကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေမှုအား အကူအညီများပေးအပ်ရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ News ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (Chin National Front - CNF) နှင့် မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ ချင်းပြည်နယ် ဟားခါး မြို့၌ ယခုလ ၆ ရက်နေ့က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။... ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ကေအင်န်ယူတို့ ဘားအံမြို့တွင် ဆွေးနွေး... ဂျော့ဆိုရော့စ်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်မည်... ဘီလ်ဂိတ်စ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည်... "မျှော်လင့်ချက်က ဒီမှာကိုယ်တိုင်လာပြီး သတင်းထောက်ထားပြီး ရုံးဖွင့်မယ်ပေါ့"... "သတင်းထောက်ဗီဇာကို အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ဘဲ ရနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်"... "မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီဆိုရင် ပြည်ပက မီဒီယာတွေ တော်တော်အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်"... "အခုချိန်မှာ နေရာလည်း ကျယ်လာသလို ဦးတည်ချက်ကလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီမှာပြန်လာ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လေ့လာတာပါ"... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်န်အယ်လ်ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာ... 'ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ရေး အထောက်အပံ့တွေကို နှစ်ဆတိုးသွားမယ်'... အသေးစား ငွေချေးလုပ်ငန်းအတွက် ဗြိတိန် ပေါင် ၁၀ သန်း ကူညီမည်... သတင်းမီဒီယာများအတွက် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် စဉ်းစားနေ... နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှိသူများနှင့် ကုမ္ပဏီများ ကားအစီးရေ ၁၇,၀၀၀ ကျော် တင်သွင်းခွင့်ရရှိ... ရန်ကုန်ရှိ ငါး၊ ပုစွန် အစာကုမ္ပဏီ ထက်ဝက်ကျော်ရပ်ဆိုင်း... လေပြင်းကြောင့် ၀မ်းတွင်းမြို့နယ်၌ နေအိမ် ၁၈ လုံး ပျက်စီး...ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ တွေ့ဆုံ...ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် အကြံပြုလိုသည်များကို လွတ်လပ်စွာတင်ပြနိုင်ရန် စာတိုက်ပုံး စနစ် ကျင့်သုံး...တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးရန်ပုံငွေများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့မှ စတင်လှူဒါန်းမည်..."လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များအပေါ် အားမရဖြစ်မှုများ ရှိနေကြသည်ကို မိမိစိတ်မကောင်းပါ" ... ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်...သဘာဝဘေးလျှော့ချရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို အလေ့အထတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင် ထားရန်လို...မီးဘေးသင့်သူများကို မှတ်ပုံတင် သန်းခေါင်စာရင်းများ အခမဲ့ ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးနေ...၀က်နားရွက်ပြာရောဂါ ပြန်လည်မဖြစ်ပွားရန် သတိရှိဖို့လို...မိန်းမလှကျွန်းတွင် မိကျောင်းငယ် ၅၅ ကောင် ပြန်လည်လွှတ်ပေး... တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် ဆောင်ရွက်ဆဲ မပြီးပြတ်သည့် ကိစ္စများကို အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေက ပိတ်ပင်ခွင့်မရှိ...၂၀၁၁ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ လူသတ်မှု ၁၅၅ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့...တရုတ်ပြည်သို့ လူကုန်ကူးမှုတွင် ပါဝင်သူများ ထောင် ၁၀ နှစ်စီချ...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) 29 January 2012(uploaded), Vol.28 No.551/ မြန်မာတိုင်းမ် ၂၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂ - အတွဲ ၂၈- အမှတ် ၅၅၁
Date of publication: 05 January 2012
Description/subject: သူရဲကောင်းဘွဲ့နှင့်ထိုက်တန်သူများ... ထောက်ပံ့မှုများ တစ်ပြေးညီရရန် မီးဘေးဒုက္ခသည်များ တောင်းဆို...စည်သူဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို အနုပညာရှင် အများအပြားရရှိ...အကျဉ်းကျနေသူများအား ပြစ်ဒဏ်များလျှော့ချ... ယခင် အစိုးရ လက်ထက် အမှုဟောင်းများ တိုင်ကြားနိုင်...လှိုင်သာယာတွင် လူ ၅၀ ခန့် အစားမှား အော့အန်ဝမ်းလျှော...ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည်နှင့် ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ် တွေ့ဆုံခဲ့... တရားစီရင်ရေး တွင် မည်သည့်လွှမ်းမိုးမှုမျှ မရှိစေ ရန် ဆောင်ရွက်မည်... တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အထူးလိုအပ်ဟု သမ္မတပြောကြား... အချိန်အခါမဟုတ် မိုး ကော့သောင်းတွင် စံချိန်သစ် တင်...လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးသူတို့ ဆုတွေ ရခဲ့ကြပြီ...နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုလာရန် ပြည်တွင်းမူဝါဒ အပေါ် မူတည်... ဘားအံစက်မှုဇုန်မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်... ရိုးရိုးဓာတ်ဆီ အစိုး ရဖြန့်ဖြူးဈေးနှုန်း ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်မှစ၍ မြှင့်တင်... ခေါင်နှံစိုက်ပျိုး နည်း ပညာ အသုံးပြုကြ ရန် ဆန်စပါးပညာရှင် တိုက်တွန်း... အင်ဂျင်နီယာ အသင်း နှစ်ပတ် လည်ပြပွဲ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... ၂၀၁၁ အတွင်း တရုတ်အိမ် ရာဈေးနှုန်းများ လအလိုက် အနိမ့်ဆုံးကျဆင်း... ၇၇ နှစ်တိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ ပကစ ကထိန်တော် အသင်းကြီးရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း က ဆောင်ရွက်ချက်များ... ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သော်လည်း အဆောက်အအုံ ဟောင်းဖျက် လုပ်ငန်းများ အရှုံးပေါ်နေဆဲဟုဆို... အဝေးပြေးကားဝင်းအ၀င်လမ်း၌ အုပ်စုဖွဲ့၍ မသမာမှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကြ... တီဘီကုသမှုရရှိရေး မီဒီယာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ...တန်ဖိုးနည်းဖုန်း အရောင်း ဆိုင်များ ၏ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာ... တောင်သမန်အင်းမှ ငှက်လှေစီးရန် ဧည့်သည် များစောင့်ဆိုင်းရ... မြန်မာလက်မှုပစ္စည်းများကို အာရှတိုက်သားများက ပိုမိုဝယ်ယူ လာကြ... တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးရန်ပုံငွေပွဲ ၂၀၁၁ မှာ အထင်ကရ ပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့... 'လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်'မှ အသံများ... ၂၀၁၁ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆင်ဆာမဲ့ အခွေများ ဖမ်းဆီးရရှိမှု နှစ်ဆမြင့်လာ... ဆရာ မြိတ်ဝင်းထိန်နဲ့ ဆရာမ နန်းတို့ရဲ့ နှစ်ဦးပေါင်းပန်းချီပြပွဲ... အကပွဲတော်ကြီး ကျင်းပမယ့် LIFE & DANCE အဖွဲ့... ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပွဲတော် ကျင်းပမည်... တာဇံကားထဲက သရုပ်ဆောင် မျောက်ဝံကြီး အသက် ၈၀ တွင် ကွယ်လွန်သွားရှာ... နာ ဂနှစ်သစ် ကူးပွဲတော်အား နာဂ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လေရှီးမြို့တွင် ကျင်းပမည်... နိုင်ငံခြားသားတွေ ရဖို့များနေတဲ့ ၂၀၁၂ ဒဂုံ ရွှေအောင်လံ... ဒိုင်လူကြီးကို အာဆင် ၀င်းဂါး ဒေါသ ထွက်နေ... အေစီ ၀ိုင်းတော် သားတွေ နဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမယ့် ပီအက်စ်ဂျီ... ယခုနှစ်ရာသီ အောင်ပွဲက အိုလံပစ်အထိ ဆက်သွားနိုင်ရန် ဖက်ဒါးရားရည်မှန်း... ဒေါင်းဓာတုဗေဒအမည်တံဆိပ် မသုံး... စပိန်ဘုရင်၏သမက် ခြစားမှုဖြင့်ရင်ဆိုင်ရမည်... အမေရိကန် စစ် သင်္ဘောနှစ်စင်း ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားဖြတ်... ကျူးဘားတွင် အကျဉ်းသားလွှတ်... လေ့လာရေးအဖွဲ့များလုပ်ငန်းစစဉ် ဆီးရီးယားရဲတို့ လူထောင်ပေါင်း များစွာကို မျက်ရည်ယို ဗုံးဖြင့်ဖြိုခွဲ... ဆွီဒင် သတင်းထောက်နှစ်ဦး ထောင်ဒဏ်ကျ...
Title: "The Myanmar Times" (Burmese) December 2011 Review/ ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း ၂၀၁၁
Description/subject: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လာပြီ... သတင်းလောက အသက်ရှူချောင်လာ... ဒေါ်လာဈေး၊ ကားဈေးတွေနဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အရောင်း အ၀ယ် အေးခဲ့ရပေမယ့်... လူရွှင်တော်ပြက်လုံးများ လွတ်လပ်ခွင့် ပိုရရှိလာကြ... အပြောနဲ့အလုပ် ညီရင် ထောက်ခံဖို့ အသင့်ပဲ ဆိုတာ နိုင်ငံတကာက ပြသခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်... မြန်မာ့ရေလုပ်ငန်း အတက်အကျများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရ... နွေခေါင်ခေါင် အနွေးထည်ဝတ်ရတာ နှစ် ၆၀ မှာ အထူးခြားဆုံး... မြန်မာ့အားကစား တော်လှန်ရေးတစ်ခု စတင်ခဲ့ပြီ... အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့...